ဖြစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး ဖြစ်ခဲ့တာ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
တကယ်တော့ နှင်းဝေမဝေတဲ့ နွေမကျ ဆောင်းမကျ ၊ ညမကျ နေ့မကျလေး တစ်နေ့မှာပေါ့။ နှင်း ရင် တွေ မအေးမြခဲ့ဘူး။ မူးဝေနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နာကျင်ခြင်း အနည်းငယ်နဲ့ နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ မှောင်မည်းနေတဲ့ အခန်းထဲမှာ အေးစိမ့်စိမ့်နဲ့လရောင်လေး ကျနေတဲ့ အချိန်မှာပေါ့။ နှင်း ရင် တွေ မအေးမြခဲ့ဘူး။ မူးဝေနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နာကျင်ခြင်း အနည်းငယ်နဲ့ မျက်လုံးလေးပွင့်လာခဲ့တယ်။ အိပ်ယာရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ လွန့်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ မျိုးမင်းကတော့ တစ်ဖက်လှည့်ကာ အိပ်စက်နေတုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီအချိန်မှာ
ကိုမျိုးရဲ့ လက်နှစ်ဖက်လုံးက သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာလေ။ ဒါဆို ငါ့ခါးကို ဖက်ထားတာက နှင်း အလန့်တကြားနဲ့ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူမတစ်ခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်။ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ။ သေချာ သတိထားကြည့်လိုက်တော့ နှင်းမှာ အဝတ်တစ်ခုမှ မရှိနေတာရယ်၊ တင်ပါးက ပျော့ဖတ်ဖတ်နဲ့ထိနေတဲ့ လီးတစ်ချောင်းရယ်၊ ကပ်စီးစီးဖြစ်နေတဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ခံစားမှုရယ်နဲ့ မူးဝေနေတဲ့ ခေါင်းက ပြန်လည် လဲကျ အိပ်ပျော် သွားပါတော့တယ်။
နာရီအနည်းငယ် အကြာမှာတော့ နှင်း ပြန်လည်နိုးထလာခဲ့တယ်။ ဦးနှောက်ထဲ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အသိဟောင်းနဲ့ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ကြည့်လိုက်တော့ နှင်း တစ်ယောက်ထဲရယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ ရေချိုးခန်းတံခါးဖွင့်သံနဲ့ ထွက်လာတဲ့ မျိုးမင်းကို တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ မထူးနိုင်သေးတဲ့ မျိုးမင်းကိုကြည့်ပြီး မေးလိုက်တယ်။
“ကိုကို ညက ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလဲ ဟင်၊ နှင်း တစ်ရေး နိုးတော့ ဘေးမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်လည်း တွေ့တယ်၊ အိပ်မက် မက်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်၊ ကို ဘာတွေ လျှောက်လုပ်ထားတာလဲ”
“အရင်တုန်းက ကိုယ်ပြောထားတာလေ၊ နှင်းလဲ သဘောတူထားတယ်လေ၊ မိုက်ကယ်က စိတ်ချပါ နှုတ်လုံပါတယ်၊ ညတုန်းက နှင်းပဲလီးကို သေချာစုပ်ပေးနေပြီးတော့”
“ဟာ မသိဘူးကွာ ဝိုးတိုးဝါးတားပဲ”
“ကဲကဲ ရေချိုးတော့ သွားမယ် ဟိုတယ်က အခန်းအပ်ရတော့မယ်
“ဟို.. ဟိုတစ်ယောက်ကော ….”
“ဟာရှက်စရာကြီးကွာ…..” (ကို့ရုံးကို ဘယ်လိုလာပြီး မျက်နှာပြတော့မလဲ ရှက်လိုက်တာ)
ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ ဘဝမှာ ဖြစ်နေတာတွေကို နှစ်သက်ဖို့လူတွေက ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ နှင်းက ထင်တယ်။ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို နှမြောနေမယ့်အစား ကိုယ့်မှာရှိနေတာလေးကိုပဲ ကျေနပ်နေတာက ပိုကောင်းတယ်မလား။ အချိန်တွေက ကုစားသွားမှာပါ။ မနေ့ကတော့ နှင်းတစ်ယောက် စာအုပ်တွေ အင်တာနက်မှာ ရှာဖတ်၊ သိချင်တာတွေ ရှာ နဲ့ အရင်တုန်းကထက်စာရင် နည်းနည်းတော့ ပိုသိလာသလိုပဲ။
ကိုမျိူးလုပ် ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေက ခွင့်လွှတ်စရာ မကောင်းပါဘူး။ အရင်တုန်း ကတော့ နှစ်ယောက်အတူတူ ချစ်တင်းနှောတုန်းကတော့ သူစိတ်ပါအောင် ပြောပေးခဲ့တာတွေက စိတ်ကူးယဉ် မဟုတ်ပဲ တကယ်ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာတော့ အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးပါဘူး။ ကိုယ်ကိုတိုင် သေချာဘာမှန်းမသိပဲ ဖြစ်ခဲ့တာတွေက တကယ်တော့ အိပ်မက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ။ ချမ်းအေးလွန်းတဲ့ မိုးသည်းသောညလေးမှာ တယ်လီဖုန်းလေး အမှတ်မထင် ထမြည်သွားတယ် ထူးထူးခြားခြား…
“ဟဲလို သူသူ ပြော”
“ကောင်မစုတ် အိမ်ထဲမှာ အောင်းနေတယ် ငါ့ဆီဖုန်းတောင် မဆက်ဘူး”
“အေးဟယ် ကိစ္စလေးတွေ ရှိနေလို”
“နင်လာခဲ့ဟာ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး”
“ဟယ် ဒါဆို နင့်ကိုမျိုး က cuckold ပေါ့”
“အေးဟယ် ငါလဲ နေ့လည်ကမှ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့မှ သိရတာ အရင်တုန်းကလဲ အဲလိုမျိုးမှန်း မသိပါဘူး နင်ဘယ်သူ့မှ လျှောက်မပြောနဲ့နော်”
“ဟဲ့ နင်နဲ့ငါက သူငယ်ချင်းတင် မဟုတ်ဘူး ညီအစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲလေဟယ်”
“အေးပါ ငါတော့ စိတ်တွေ တော်တော်ညစ်နေတယ်”
“နင်အဲ့ညက ဘာမှ မမှတ်မိဘူးလား”
“အင်း မနက် ဟိုတယ်က မထွက်ခင် ငါ ရေချိုးခန်းဘက် သွားတော့ ခုတင်ဘေးက အမှိုက် ပုံးထဲမှာတော့ ကွန်ဒုံး သုံးခုလောက်တော့ လရည်တွေနဲ့အပြည့် ပစ်ထားတာတွေ့တယ်”
“တော်သေးတာပေါ့ နင့်ကို ဒီအတိုင်း မလုပ်တာပဲ ကံကောင်းတာလို့ မှတ်ရတော့မှာပဲ”
ရုံးခန်းထဲ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ရှေ့ကထိုင်နေတဲ့ မစိုးစိုး ရဲ့ ကောက်ကြောင်းလေးကို ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်။ ကြည့်မိတော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ လီးတောင်လာပါကောဗျာ။ ကိုမျိုးဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း မကောင်းဘူးဗျ။ မစားဖူးတာလဲ မဟုတ် မမြင်ဖူးတာလဲ မဟုတ်။ အိမ်မှာလဲ မိန်းမက ငုတ်တုတ်…။ တကယ်ပါဗျာ အဲလို တွေ နှာကြီးခဲ့တာတွေကြောင့်လဲ ကိုယ့်မိန်းမ ကို ပြန်ပြီး ပေးရတဲ့ အထိပေါ့။ ပြန်ဆက်ရအောင်ဗျာ စိတ်ကူးတွေ များနေရင် လုပ်လက်စတွေ ရပ်တန့်သွားတတ်သလိုပေါ့။
ခုနက ကျွန်တော်ရှေ့က မစိုးစိုး ဆိုတာက company ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး။ company ဆိုလို့လဲ အရမ်းကြီးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူနည်းနည်းနဲ့ inport company လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ အမှာတွေများတာတို့ စာရင်းပိတ်တဲ့ နေ့တွေလောက်သာ အလုပ်များကြတာပေါ့။ ကျန်တဲ့ရက်တွေကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ကိုယ့်အထက်က လူကလည်း သြစတေးလျက ကောင်ဆိုတော့ အလုပ်ကတော့ အလုပ်နဲ့တူပါတယ်။ အလုပ်မများတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့ ကော်ဖီလေးသောက် စကားပြောနေကြတော့ပါပဲ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်မိလို့ဗျ မစိုးစိုး ဆိုတာကတော့ သူ့ဆော်လေ။ မစိုးစိုးက တောင့်တယ် လူကောင်မကြီးမသေး မြန်မာမိန်းကလေးထဲ မှာတော့ ၅ ပေ ၆ လက်မ လောက်ရှိတဲ့ အရပ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်း လှတယ်ဆိုတဲ့ထဲပါတယ်ဗျာ ။ အသက်ကတော့ 29 လောက်ပေါ့ ။ ကျွန်တော့်ထက် ၁ နှစ်ပဲ ကြီးပါတယ်။ မျက်နှာကတော့ တင်းပြီး ရှင်းနေတာပဲ။ မိတ်ကပ်တွေ အများကြီး မသုံးတတ်တဲ့ ရေစို မိတ်ကပ် အဲလိုမျိုးပဲဗျ ။ ယောကျ်ားလေးဆိုတော့ သိပ်မသိလို့။ ပြောရင်းဆိုရင်း စကားတွေတောင် ဘေးရောက်လာတော့တယ်။
မစိုးစိုးနဲ့ မိုက်ကယ်က ဒီ company လေးကို စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ လူတွေပေါ့။ မိုက်ကယ်က အရင်ဆုံး မြန်မာပြည်ကို လာတယ် အတွင်းရေးမှူးရှာတယ်။ မစိုးစိုးနဲ့တွေ့ ရုံးခန်းတွေငှား လူခေါ်နဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဘန်ကောက်ကမှာ။ ဘန်ကောက်မှာက ရုံးချုပ်လေ။ ဇာတ်လမ်းလေး ပြန်ဆက်တာပေါ့။ မစိုးစိုးနဲ့ မိုက်ကယ်က ချစ်သူတွေဆိုတာ သိတာက ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲပါ။ မစိုးစိုးအိမ်က လူတွေကတော့ မသိပါဘူး ရုံးမှာ အလုပ်က လူကြီးဆိုတာလောက်ပဲ မိုက်ကယ့်ကို သိကြတာပါ။ သူတို့ကလည်း ပိရိတယ်လေ ကျွန်တော်တောင် ဘယ်လိုသိလဲ ဆိုတာတော့ ရေးရင်းပြောပြမယ်။
မစိုးစိုးကတော့ ကလေးတစ်ယောက် အမေပါ။ ယောကျ်ားနဲ့တော့ ကွဲသွားတာကြာပြီလို့ ပြောတာ ပါပဲ။ တစ်ရက်ဗျာ အလုပ်က ပြန်ပြီးတော့မှ အိမ်မှာ စာရင်းပြန်စစ်ဖို့ Stick ကျန်လို့ လမ်းတစ်ဝက်ကနေ ရုံးကိုပြန်လာတော့မှ သူတို့ကလဲ အရှိန်တတ်နေ၊ ကျွန်တော့်မှာလဲ သော့ကရှိ၊ မိုက်ကယ့် အခန်းက မီးမပိတ်သေးပါလားလို့ သွားအကြည့်။ မိုက်ကယ်က သူ့စားပွဲမှာ မစိုးစိုးကို မှောက်ခုံတင်ပြီး ဝတ်ထားတဲ့ စကပ်အနက်ကို လှန်တင်ပြီး မှုတ်နေတာဗျာ။ မစိုးစိုးကတော့ မျက်လုံးကို မှိတ်နေတာပဲ ဖီးတတ်နေတာနေမှာပေါ့။ သူတို့ကတော့ ကျွန်တော့်ကို မမြင်ပါဘူး။
မစိုးစိုးကတော့ ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ တံခါးပေါက်ကို လေးဖက်ကုန်းပြီး မျက်နှာ မူထားတယ်ဆိုပေမယ့် မျက်လုံးမှိတ်ထားတော့ ကျွန်တော့်ကိုတော့ မြင်ပုံမရပါဘူး။ အသံတွေကလည်း မတိုးမကျယ်ဗျ ။ မိုက်ကယ်ရဲ့ လျှာသံက ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပြုစုနေတာ အသေအချာပါပဲ ။ အစိကို ဆွဲစုပ်တဲ့ အသံတွေဆိုတာ ဆက်တိုက်ကို ထွက်နေတာပဲ။
အဲဒီအချိန် မိုက်ကယ်က မတ်တပ်ရပ်ပြီး မစိုးစိုးနောက်ကနေ တည်ပြီး တစ်ချက်ထဲထည့် ပလိုက်တာ နောက်က မိုက်ကယ်က အထည့် မစိုးစိုးရဲ့ မှောက်ခုံ ခန္ဓာကိုယ်လေးက ရှေ့ကို အတိုး မျက်လုံးကအပွင့်။ တံခါးကြား ကျွန်တော့် မျက်လုံးနဲ့အဆုံ။ အဲဒီ့သုံးခုစလုံးက ကွက်တိဖြစ်တာဗျ။ လီးဆိုတာ ဆတ်ကနဲ ရုန်းပြီး အရည်ကြည်တွေတောင် ထွက်တယ် ကောင်းတာဗျာ။ ကြည့်တဲ့လူတောင် ဖီးရှိတာ လုပ်နေတဲ့ နှစ်ယောက်ဆို စဉ်းစားသာကြည့်တော့။
နောက်တော့ မိုက်ကယ်လည်း ကျွန်တော့်ကို မြင်တာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဘာလုပ်ရမလဲ ပြန်ထွက်ရမလား တွေဝေနေတုန်း မိုက်ကယ်က
“မျိုး အခန်းထဲ ဝင်လာပြီး မင်းကြည့်ရင် ငါတို့ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပါဘူး၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား စိုး”
လို့ လှမ်းမေးပြီး သုံးချက်လောက် ဆောင့်တော့ မစိုးစိုးက ခေါင်းညိတ်တာ လက်ခံတာလား ဆောင့်ချက်မိလို့ ကိုယ်လုံးက လှုပ်တာပဲလား တော့မသိ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဝင်ချလိုက်တာပါပဲ မိုက်ကယ့် အခန်းထဲ။
တသက်တစ်ကိုယ် အောကားတွေ ကြည့်လာလိုက်တာ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ အထိ မကြည့်ဖူးပါဘူး။ ချောင်းဖူးတယ် ဆိုတာလဲ အဲလိုအထိတော့ မမြင်ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လိုနေသေးတာတော့ မစိုးစိုးရဲ့ နို့တွေကို အခုထိ မမြင်ရသေးတာပါပဲ။
” မင်းလိုအပ်နေတာတွေအတွက် မင်းဘာသာ လုပ်ပေတော့ ”
မိုက်ကယ်လည်း ပြောရော ဒီကောင်ကြီးက ငါ့စိတ်ထဲက အတွေးတွေကို သိနေတာပဲလို့ တော်ကြာ ငါဖြုတ်ချင်နေတာများ သိနေရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။
မစိုးစိုး ရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ‘ စိ စိ ‘ ဆိုပြီး ဝင်ထွက်သံတွေကလည်း တစ်ချက်ချင်း မှန်မှန် ထွက်ပေါ်နေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း မဆိုင်းမတွပဲ မစိုးစိုးရဲ့ စပို့ရှပ်လေးကို ခါးလောက်ကနေ ကျောအပေါ်ဖက်အထိ လှန်တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘော်လီ ချိတ်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ နို့တွေပေါ်လာပြီလို့ မထင်ပါနဲ့ သူနို့တွေက စားပွဲပေါ်မှာ ပိနေတုန်းပါပဲ။
မိုက်ကယ်က အလိုက်သိစွာနဲ့ မစိုးစိုးရဲ့ ခါးလေးကို နောက်ကို ဆွဲယူပြီး နောက်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆုတ်ပြီး စားပွဲနဲ့ ခြေလှမ်း ၃ လှမ်းလောက် အကွာ နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာလေးဆီကို ဦးတည်သွားပါတော့တယ်။ ဆိုဖာလေးက ရုံးခန်းထဲက ဧည့်သည်တွေဘာတွေ လာရင် ကော်ဖီတိုက် ဧည့်ခံတဲ့ နေရာလေးပါ။ အခုတော့ ကျွန်တော်ကြည့်ဖူးတဲ့ Casting porn movies တွေထဲက Interview အတွက် Fake agent တွေ video ရိုက်တဲ့ နေရာလေးလိုပါပဲ။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော် လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ပြီးနောက်တော့ မစိုးစိုးလည်း အပေါ်ပိုင်း ဗလာဖြစ်၊ အောက်ပိုင်းကတော့ မိုက်ကယ့်လီးက မစိုးစိုး အဖုတ်ထဲက မချွတ်တမ်း တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်လိုက်၊ စိမ်လိုက်နဲ့ဆိုတော့ လွှတ်ကောင်းပဲ။ တစ်ခုထူးခြားတာက မစိုးစိုးရဲ့ မျက်နှာနဲ့ မျက်လုံးတွေပဲ။ ရှက်နေတာတွေ မလုံမလဲ ဖြစ်နေတာတွေ မရှိပဲ ငါလုပ်ချင်နေတာတွေ လုပ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံဗျာ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဖာတွေ ချလာခဲ့တာ မနည်းပါဘူး။ မျက်နှာပေါင်းစုံ တွေ့ဖူးတာတောင် အဲလို မျက်နှာမျိုး မတွေ့ဖူးပါဘူး။
လောကကြီးမှာ ထင်တာတွေက မဖြစ်လာပဲ မထင်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာ တကယ် ပါပဲ။ ကိုမောင်နဲ့ ချစ်ခဲ့တာ ရပ်သိရွာသိ ၇ နှစ်ကျော်တယ်။ သူလုပ်ချင်တာတွေ မှန်သမျှ စိုး အကုန် ဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်။ ကိုမောင်က စိုးရဲ့ ရည်းစားဦးလေ။ ဆယ်ကျော်သက် တက္ကသိုလ် စတက်တော့မှ တွေ့တာ။ အရင်တုန်းထဲက ဆယ်တန်းအထိ ရည်းစာတောင် ထားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုမောင် နဲ့ တွေ့တော့မှ စိုးက ရင်ခုန်ခဲ့တာ။
ကိုမောင်က ရုပ်တော့ မချောပါဘူး။ အရပ်ပုပုနဲ့ပါပဲ။ သူ့မှာ တစ်ုကောင်းတာက ပြေလည်တဲ့ စီးပွားရေးးကောင်းကောင်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်။ ကိုယ့်ထက် အသက် ၃ နှစ်လောက်ကြီးပြီး တဏှာရာဂလည်း သိပ်ကြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့။
သူနဲ့စကြိုက်ပြီး ၃ လလောက် ကြာပြီးတော့ စလိုးခံရတော့တာပဲ။ ကောင်းကောင်း လိုးပေးနိုင်တယ်။ အဲဒီ့အတွက် ဗဟုသုတလည်း စုံတယ်။ အောကားထဲက နည်းပေါင်းစုံလည်း စမ်းခဲ့တယ်။ အနောက်ကတော့ တစ်ခါတော့ စမ်းဖူးတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ ခံစားလို့ မကောင်းဘူး။ သူလည်း သိပ်မကြိုက်တာလဲ ပါတာပေါ့။ သူနဲ့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ တစ်လျှောက် ကွန်ဒုံးဆိုတာ တစ်ခါမှ မသုံးခဲဖူး။ သူက အရည်တွေ အထဲထည့်ပြီး အဖုတ်သားတွေကို သူ့လီးနဲ့ ထိတွေ့မှု အရသာကို ကြိုက်တယ်။ ဖာချမှသာ ကွန်ဒုံးသုံးတာ။ တကယ်ပြောတာ သူများတွေ ယုံချင်မှ ယုံမယ် လိင်ကိစ္စအတွက် ကျွန်မ လုံးဝ သဝန်မတိုတတ်ဘူး။ ကျွန်မကို ချစ်နေဖို့ရယ် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဖွင့်ဟဖို့ရယ်ပေ့ါ။
KTV တွေ သွားတုန်းကဆို ကျွန်မက ရာသီလာနေတာလေ။ သူနဲ့ အတူတူသွား။ သူငယ်ချင်းတွေပါပေါ့။ သူက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရွှေ့တော့ ကျွန်မကို မျက်စပစ်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း အစ်မလိုပဲပေါ့ လုပ်ပေါ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးတယ်။ နောက်နေ့ကျတော့ သူ့တိုက်ခန်းမှာ ကောင်မလေးကို ခေါ်လုပ်တော့တာပဲ။ တစ်ပုံးလောက်တော့ ပေးလိုက်ရတယ် ပြောတာပဲ။ ပြီးတော့ ကိုမောင်ကပြောသေးတယ် မင်းနဲ့ လိုးရတာလောက်တော့ မကောင်းဘူးတဲ့။
ဘယ်ကောင်းမလဲ စိုးစိုးဆိုတာ ဒီယောကျ်ား တစ်ယောက်ထဲနဲ့ ဖြစ်ဖူးတာလေ ဘယ်တူပါ့မလဲ။ အရသာချင်း တူရင်တူမယ် သံယောဇဉ်ချင်းက မတူ။ တန်ဖိုးချင်းလည်း မတူ။ ပညာအရည်အချင်းလည်း မတူတဲ့ အပေါစား မိန်းမတစ်ယောက်ကို သူစွဲလန်းပြီး ကိုယ့်ကို စွန့်ခွာသွားမယ် ဘာဝမ်းနည်းစရာရှိမလဲ။ အောကားကြည့်ပြီး စောက်ရည်ပဲ အထွက်ခံလိုက်တော့မယ်။ ချစ်တာကတော့ ချစ်တာပေါ့။
ထားပါ။ ကွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း အင်တာနက် ချိတ်ထားတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ sex ကိစ္စတွေ ပြောတယ်။ သူတို့မေးတာလေးတွေ ဖြေတယ်။ ကိုယ်လည်း ဘာတွေ ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ ကောင်လေးတွေနဲ့ ပြောတယ်။ သူလည်း သိတာပဲ။
သူမပါပဲ ခရီးထွက်တော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က မန္တလေးမှာ တည်းတော့ gigolo လေးတွေ ခေါ်တော့ ကိုယ်လည်း group sex လေး တွေ ကြည့်ချင်တာနဲ့ ကိုယ့်ရှေ့မှာပဲ လုပ်ဟာ ဆိုပြီး ကြည့်ပစ်တာ။ ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ လူတွေ ဆိုတာလည်း စိတ်တူကိုယ်တူပါပဲ။ အသိုင်းအဝိုင်းတောင့်တဲ့ သူတွေချင်းပဲဆိုတော့ ပြောရဆိုရကောင်းတယ်။ ဘယ်စကားပြော ဘယ်ရောက်လဲ သိတယ်။ ပုလင်းတူဗူးဆို့ လို့ပြောရင်ရပေမယ့် အဖုတ်တူ လီးဆို့ဆို ပိုမှန်မလားပဲ။ ကိုယ်တွေကလည်း ကြိုက်တော့ အဲအစီအစဉ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့။
ကျွန်မကတော့ သူတို့နဲ့ မနေချင်ပါဘူး။ ကြည့်ရတာလည်း ကောင်းတယ်။ အဖုတ်ထဲ သူများလီးထည့်တာကျတော့ သစ္စာဖေါက်သလို ဖြစ်နေတာကိုး။ အဲနေ့ ညဘက်က သူတို့အဒေါ်ပိုင်တဲ့ အိမ်မှာတော့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဟိုတယ်တစ်ခုက suite room တစ်ခန်းယူပြီးတော့ အားလုံး ပေါင်းနေကြတယ်။ ကောင်လေးက သုံးယောက်တောင် ဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက် မပါဘူးဆိုတော့ သူငယ်ချင်းက
“အေးပါ နင့် အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့အတွက်ပါ။ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် Threesome လေးဘာလေး ချလို့ရတာပေါ့။”
“တစ်ခါတည်းပါဟာ ကောင်လေး ၃ ယောက်နဲ့ ဟိဟိ။”
ည ၇ နာရီလောက်တော့ ကောင်လေးတွေ ရောက်လာတယ်။ သူတို့ကလဲ walk in နဲ့ အခန်းယူထားတာပါ။ မန္တလေးကတော့ မဟုတ်ဘူး ရန်ကုန်က သီးသန့်မှာထားတာလေ။ သူတို့ကိုလည်း ဒီကလူတွေက ဘယ်သိပါ့မလဲ။ အဲ့ကောင်မတွေ ဒီကိစ္စတွေဆို တော်တော် ဉာဏ်ပြေးတယ်လေ။ ဘယ်လို cover ယူရမလဲ risk နည်းအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိနေပြီးသား။ လူဆိုတာ ဘာပဲလုပ်လုပ် profit များများ နဲ့ risk နည်းအောင် လုပ်တတ်မှဗျနော့။
Black Label တစ်တောင့် နဲ့ ABC ဗူးနည်းနည်း လောက်နဲ့ အမြည်းတွေပါ တစ်ခါတည်း စီစဉ်ထားပြီးသားလေ။ ကျွန်မကတော့ ဝီစကီလေး နည်းနည်းသောက်ဖြစ်တယ်။ နည်းနည်းလောက်စီ သောက်ပြီးတော့ ပြီးတော့ အဝတ်အစားချွတ်တဲ့ ဖဲကစားနည်းလေး ကစားကြတယ်။ ကံဆိုးတာလား ကံကောင်းတာလားဆိုတော့ အတွင်းခံ တောင်မကျန်ပဲနဲ့ ကျွန်မ အရင်ဆုံး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပွဲတွေများလာတော့ ချွတ်စရာလည်း မရှိတော့ဘူး။ ကစားနည်းလောင်းကြေး များသွားတယ်။ ကိုးမီးမှာ အပွင့်အများဆုံးလူက အပွင့်အနည်းဆုံးလူကို
အရင်ဆုံး ကံကောင်းတာက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထဲက ကုလားဆင်လေးပါ။ တောင့်တောင့်တင်းတင်းလေး။ သူနိုင်တော့ အနည်းဆုံး ကောင်လေးကို မှုတ်ခိုင်းတာ။ ကောင်လေးကို မှုတ်ခိုင်းတာ ရိုးရိုးလေး မဟုတ်ဘူးရယ်။ ကောင်လေးထိုင်တဲ့ရှေ့မှာ လေးဖက်ကုန်းပြီး မှုတ်ခိုင်းတာ။ ဖင်ကြားနဲ့ စောက်ဖုတ်ကို စုန်ချည်ဆန်ချည်နဲ့ လျှာနဲ့ ပြေးခိုင်းတာ။ ကျွန်မတောင် ဘေးနားကကြည့်ပြီး အမှုတ်တောင် ခံချင်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ မိနစ်တွေ တော်တော်များများ ဖြတ်သန်းပြီးတော့ သူတို့လည်း ဆွဲတော့ အသံတွေက ဆူညံနေတာပဲ။ ကျွန်မလည်း အဝတ်တောင် ပြန်မဝတ်ဘဲ ထိုင်ကိုကြည့်နေတာ။
သူတို့ လိုးနေတာကလည်း ကောင်းပါတယ်။ စကားလေးပြောလိုက် သူတို့ စမ်းချင်တဲ့ နည်းကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြောလိုက်။ ပုံစံပြောင်းလိုက်နဲ့ တော်တော်ကောင်းနေကြတာ။ နောက်တော့ ခုနက ကုလားဆင်လေးက ကောင်လေးလီးပေါ် တက်ထိုင်ပြီး ဖင်ဖြဲပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက်ကို ထည့်ခိုင်းလိုက်တော့ တော်တော်တောင် မျက်လုံးပြူသွားတယ်။ အဲလောက်ကြီးတော့ မလုပ်ဘူးထင်လို့ပေါ့။ ကျွန်မထင်တာက တစ်ယောက်ကို လိုးခိုင်း တစ်ယောက်ကို မှုတ်ပေးလောက် ထင်တာလေ။
ကောင်လေးတွေကတော့ အားရပါးရ ၂ နာရီလောက် ဗျင်းပြီးတော့ သူတို့လည်း တော်တော်ကောင်းသွားပြီး ခဏနားကြတာပေါ့။ အဲတော့မှ သူငယ်ချင်း နောက်တစ်ယောက်က
“ဟဲ့ စိုး နင်လဲ ဆွဲပါလားဟာ ကိုမောင်တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ မရိုးဘူးလား”
“ငါ့မှာ ရိုးဖို့နေနေသာသာ ဝတောင် မဝသေးဘူး”
“အေးပါ နင်အမှုတ်ခံပါလား ကောင်လေးတွေက မှုတ်တာကောင်းတယ်”
“လုပ်တော့ လုပ်ချင်တယ် ပြီးရင် အတောမသတ်နိုင်မှာစိုးလို့”
“မမကလဲ စိတ်ချပါ၊ အစ်မဟာလေးကို မလုပ်ပါဘူး၊ မှုတ်ပေးမယ်လေ”
“အင်း ခဏပဲနော် နင်တို့လည်း လုံပလေ့စေ”
ကောင်လေးတစ်ယောက်က ပေါင်ကြားထဲ ဝင်လာပြီး ခြေဖဝါးလေးတွေကို လျှာနဲ့ စယက်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ပေါင်၊ နောက်တော့ ရွှေခရု၊ ဖင်ကြား တစ်နေရာမှ တံတွေးလွတ်တာ မရှိပါဘူး။ မျက်လုံးတောင် မဖွင့်နိုင်ဘူး။ ကောင်းနေရင် မျက်လုံးမဖွင့်ချင်တာက စိုးစိုးရဲ့ အမှတ်အသားလေ။ မျက်လုံးမှိတ်နေတုန်း လက်ထဲ ရောက်လာတာက လီးနှစ်ချောင်း။ ဟိဟိ။ ဟိုကောင်မနှစ်ကောင်က ရယ်နေတာလေ။ သူတို့က ထိုင်ကြည့်နေတာလေ။ ကိုယ့်မှာသာ လီးနှစ်ချောင်း မပျော့မမာ လေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ကာ ထုပေးနေရတယ်။
“အေး တောင်လာမှ နင့်တို့ဟာထဲ ပြန်ဆို့ခိုင်းထားမယ်”
“မဟုတ်ပါဘူး မမ၊ ညီမလေးကို ရန်မရှာပါဘူး၊ မမ တင်ပါးတွေကို ကိုင်ပြီး သေချာမှုတ်ချင်လို ”
“မမ စောက်ပတ်က တကယ်လှလို့ပါ”
“သြော် မမတို့ ညီမလေးတွေ အားလုံး လှကြပါတယ်၊ အနံအသက်တွေလည်း ကောင်းတယ်၊ ဒီမမ ကတော့ တကယ်လှလို့ပါ၊ တက္ကသိုလ်နေဝင်းရဲ့ “သူလိုမိန်းမ” ထဲကလို လေးဗျ”
“အောင်မာ မိစိုး မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တော့ မြှောက်နေပြီ”
“မဟုတ်ပါဘူး မမကိုသာ လုပ်ရလို့ကတော့ ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြော၊ ကိုယ့်စားရိတ် ကိုယ်စားပြီး လာလိုးပေးမယ်၊ တကယ်ပြောတာ ဖင်ဝလေးတွေကအစတကယ်လှတာ”
ပြောနေရင်း ဖင်ဝလေးကိုဖြဲ လျှာနဲ့ ဝလုံး လုံးပစ်တာ စောက်ရေတောင် တောက်တောက်ကျတယ်။
“ငါ့ဟာကို ကိုမောင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ဟာမှ မထည့်ဘူး”
“ဟိုတစ်ခါ လုပ်တုန်းကတော့ နာတယ်၊ နောက် သူလဲ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး”
” မောင်လေးရေ ဖင်လိုးပေးလိုက်ပါလား၊ မောင်လေးက အစ်မကို ဖင်ချတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ”
“မလုပ်ပါနဲ့ဟာ နာတယ်ဟ၊ ပြီးတော့ စိတ်ထဲလဲ တမျိုးပဲ၊ ကိုမောင်သိရင် သတ်လိမ့်မယ်”
“ပြောနေကြာတယ် မောင်လေးရေ ထည့်လိုက်တော့”
ဆိုပြီး ဟိုကောင်မနှစ်ကောင်က ကျွန်မကို မှောက်ခုံဖြစ်အောင် ချုပ်ပါလေရော။ လူက မရုန်းချင်တာလား မူးတာလားတော့ မသိဘူး။
“စောက်ပတ်ထဲတော့ လီးမထည့်ပါနဲ့ဟာ ဖင်ကိုလည်း နာရင် မထည့်ပါနဲ့”
ဆိုပြီး တောင်းပန် ပြောရသေးတယ်။ ကောင်လေးက ကွန်ဒုံးစွပ် ဂျယ်လေးဖင်ဝသုတ်ပြီး ထည့်တာ။ လျှောကနဲ ဆိုပြီး ဖင်ဝက ညှစ်ထားတော့ ချော်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ ထိပ်ဝင်လာပါကော။ တော်သေးတယ် ဘယ်သူမှ မမြင်ဘူး။
ဟိုကောင်မ နှစ်ကောင်က ရှေ့ကနေ လက်တွေကို ကိုင်ထားပြီး နောက်နှစ်ယောက်ကတော့ စိတ်မပါဘူးထင်ပါရဲ့ BLACK နဲ့ သုံးပါးသွားနေကြတယ်။ သူတို့လည်း မောနေမှာပေါ့ ဟိုကောင်မတွေကို ဗျင်းထားရတာဆိုတော့ နားတော့မှာပေါ့။
မဝင်ဘူးဆိုတော့ ဟိုက နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး ပြန်အထိုး ဖင်အကော့နဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ ဝင်လာပါတယ်။ သူကတော်တာလား ကိုယ်က လျှော့ထားတဲ့ အချိန်လားတော့ မသိ။ ဟိုတစ်ခါ ကိုမောင် လုပ်သလောက် မနာပဲ လျှောလျှောလျှူလျှူ ပါပဲ နေလို့လည်း ကောင်းတယ်။
“ဒါများ မူနေသေးတယ်၊ ခုနထဲက နေလိုက် ပြီးနေတာပဲကို”
“ကောင်မ အခုကျတော့ ငြိမ်လို့….”
ဆိုပြီး ကောင်လေးတွေဆီသွားပြီး အရက်ထပ်သောက်နေတော့တယ်။ နောက်တော့ သူတို့လေးယောက်လည်း ခုတင်ပေါ်သွားပြီး ပွတ်လိုက် လုပ်လိုက်နေမှာပေါ့။ မမြင်တော့ပါဘူး။ ကွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ LIVING ROOM ခန်းထဲ တစ်ယောက်က မှောက်ခုံနေပြီး တစ်ယောက်က ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဖင်ချနေတာပေါ့။ ယ
အဲဒီ့မှာပဲ သိလိုက်တာက လက်တစ်ဖက်က နောက်ကနေ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ဖင်အကြွ ဆောင့်ထည့်လိုက်တာ စောက်ဖုတ်ထဲကို တည့်တည့်နဲ့ အဆုံးထိပါပဲ။ “အု” ဆိုပြီး အသံတောင် မထွက်တော့ပါဘူး။ ကောင်းတာလည်း ပါပါတယ်။ သူကတော့ တိုးတိုးနဲ့
“မမကို စောက်ဖုတ်လိုးတာ ဘယ်သူမှ မသိစေရပါဘူး”
ဆိုပြီး နောက်ကတော့ ဆောင့်လျက်သားပေါ့။ ကျွန်မလည်း ဘယ်ရမလဲ ငြိမ်ခံနေလိုက်တာပေါ့။ ဒီလိုတော့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး နည်းနည်းကြာတော့ သူပေါ်ကိုထိုင်ပြီး အားရပါးရ အချက်တစ်ရာလောက် ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ်။ သူကတော့ လက်နှစ်ချောင်းပူးပြီး ဖင်ထဲကို ထည့်ပေးထားသေးတယ်။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲ။ ကွန်ဒုံးကို ချွတ်ပြီး လဥကိုဆွဲစုပ်ပြီး ဒစ်ကနေစပြီး စုပ်ပေးလိုက်တာ လရည်တွေများ သုံးခါလောက် ခွဲမြိုရတယ်။
ပြီးတာတွေတော့ ပြီးခဲ့ပါပြီ။ နောက်တော့ ကျွန်မ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်။ ရတာတော့ ကိုမောင်နဲ့ ရတာပါ။ ကိုမောင်ကတော့ မယူချင်သေးဘူးရယ်။ မြို့မှာပဲ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် ကျွန်မတို့သုံးယောက်သတင်းကို ဘယ်ကဘယ်လို သိသွားလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး။ သူနဲ့ရတာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး လုပ်ပါလေရော။ ကျွန်မက GIGOLO လေးနဲ ရတာဆိုပြီး ပြီးတော့ စွပ်စွဲသေးတယ်။ စွပ်စွဲတော့လည်း လက်ထပ်ပြီးနေပြီပဲ။ ကိုယ့်ဖက်က မှန်တာတော့သေချာတယ် သူနဲ့ရတာပဲ ဟိုကောင်လေးနဲ့က ကွန်ဒုံးနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တာလေ။ သူနဲ့ပဲ ၇ နှစ် လုံးလုံး တူတူနေပြီးတော့ ကလေးရတော့မှ သူမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတော့ အမေတို့ကတော့ ဘာဖြစ်လဲ ငါတို့လည်း ငွေရှိတယ်ဆိုပြီး မပေါင်းခိုင်းပဲ သီးသန့်နေလာရကနေ ကွဲတာပဲ။ တူတူမှ မနေကြတာကိုး။
ရန်ကုန်မှာ တစ်ယောက်ထဲ နေတယ်။ သင်တန်းတွေ တက်တယ်။ အလုပ်တစ်ခု ရတယ်။ အဲ့ဒီအလုပ်မှာ ပညာတွေ တော်တော်ရပြီးတော့ အခု company လေးမှာ အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်။ မိုက်ကယ်နဲ့ တွေ့တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံဖြစ်တယ်။ အတူတူ အလုပ်လုပ် တစ်ခါတလေ လိုးကြပေါ့။ သူပြောတဲ့ အရာတွေကလည်း ကိုယ်က သိနေပြီးသားလေ။ အခုလုပ်နေတုန်းတော့ တံခါးဖွင်သံကြားတည်းက ကိုမျိုးမှန်း သိသားပဲ။ မိုက်ကယ်က တမင်တကာ မြင်ရအောင် တံခါးသွားဖွင့်တာကော။
အဲနေ့ကတော့ ကိုမျိုးလည်း ဆွဲရပါတယ်။ နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ပေါ့။ ကိုမျိုးက လူရည်သန့် တစ်ယောက် ဆိုတာရယ် ကိုယ့်အကြောင်းလည်း ပြန်ဖွမဲ့ လူလဲ မဟုတ်မှန်းသိနေတော့ လိုးကြတာပေါ့။ အဲနေ့က မိုက်ကယ့် အခန်းမှာပဲ ကိုမျိုးနဲ့ နှစ်ချီ၊ မိုက်ကယ်ကတော့ သုံးချီ။ လူလည်း ပျော့ခွေ သွားတာပါပဲ။ ဦးနှောက်ရှိတဲ့ လူတွေဆိုတော့ နောက်နေ့ အလုပ်လာလည်း ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေတာပါပဲ။ ဟိုကိစ္စနဲ့ ဒီကိစ္စကို မရောကြဘူးလေ။ မိုက်ကယ် က ကိုမျိုးနဲ့ လုပ်ရင် သူ့ရှေ့မှာပဲ လုပ်ရမှာဆိုတော့ နောက်ပိုင်း လေးခါလောက် တူတူ သုံးယောက်သား လိုးဖြစ်ကြတယ်။
ကိုမျိုး တစ်ယောက် နှင်းနှင်းကို မိုက်ကယ် နဲ့လွှတ်ပေးတဲ့ နေ့ကတော့ နှင်းနှင်းကို PIONEER ကလပ်ကိုခေါ် ဘီယာလေးတိုက် သုံးခွက်လောက်တိုက်ပြီးတော့ tequila လေး လေးခွက်လောက် တိုက်တော့ တော်တော် မူးနေပြီရယ်။ နောက်တော့ ဝီစကီလေး နည်းနည်းတိုက်။ အစုံလဲတိုက်ရော ဘာမှန်း နှင်းနှင်းတစ်ယောက် မသိတော့ဘူးရယ်။
ကလပ်ထဲ အသင့်စောင့်နေတဲ့ မိုက်ကယ်က ကားနောက်ခန်းမှာ နှင်းနှင်းကို ဖက်ထားတော့ ကိုယ်က ကားမောင်းနေရင်း ဒေါသထွက်တာ နည်းနည်း ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်က သူ့ဆော်ကို လိုးထားတာဆိုတော့
ကားမောင်းနေရင်း လီးတောင် တောင်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အခန်းရောက်လာတော့ မစိုးစိုးက အသင့်စောင့်နေတယ်။ သောကတွေ ပြေပျောက်သွားအောင်လို့တော့ မစိုးစိုးရဲ့ ရေချိုုးထားတဲ့ တာဝါ ပတ်ထားတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးက ဆီးကြိုနေပါတယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ တစ်ခန်း ကျွန်တော်တို့ကတော့ တစ်ခန်းဆိုပေမယ့် မစိုးစိုးကို ဒီအခန်းမှာ တစ်ချီ၊ နောက်တစ်ခန်းမှာတော့ သုံးချီလောက် ဆွဲဖြစ်တယ်။ မစိုးစိုးတစ်ယောက် ကျွန်တော် ပက်လက်လှန်ထားတဲ့ အပါ် ပြောင်းပြန်လှည့်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို mask တစ်ခု တပ်ထားစေပြီး သူကတော့ ကင်မရာတစ်လုံးချိန်ပြီး အမျိုးမျိုး တက်လိုးနေတော့ လိုးနေရင်း တစ်ခုမေးလိုက်တယ်။
“ဘာလို့ ဗီဒီယို ရိုက်တာလဲ မစိုး”
“မင်းမျက်နှာ မပါပါဘူး၊ သူ ဟိုနေ့က ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဖြစ်တာကို ရိုက်ပို့တယ်လေ”
“သူက အွန်လိုင်းပေါ်တင်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ”
“အစ်မလည်း တင်လိုက်မှာပေါ့၊ သူလဲ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ၊ ကဲထားပါ လင်လေးရယ် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပါ”
ဆိုပြီး ကျွန်တော့် ခေါင်းပေါ်ခွပြီး ဘာဂျာ ကိုင်ခိုင်းလို့ သေချာကိုင်ပေးလိုက်ရတယ်။ ဆံပင်တွေကို ဆွဲ ပြီး အမှုတ်ခံတာ အသက်ရှူတောင် ကြပ်တယ်။ ပြီးတော့ ကင်မရာရှေ့မှာ လေးဖက်ကုန်းပေးတယ်။
မျက်နှာကတော့ ခင်ဗျားတို့မြင်လို့ ပြေးပြီးမလိုးချင်ရင် ကျုပ်သာလာသတ်။
ကျွန်တော်လည်း တော်တော် ဆောင့်ပေးပြီး ပြီးချင်လာတော့
“ခဏလေး။ အစ်မက ပြီးချင်လာပြီ၊ မောင်လေးလည်း ပြီးချင်လာပြီ မဟုတ်လား”
“အစ်မ ပက်လက်လှန်ပေးမယ်၊ မောင်လေး ပြီးချင်လာပြီဆိုတာ အစ်မသိတယ်၊ အစ်မက ကိုယ့်ကိုလိုးတဲ့ လူက ပန်းထုတ်နေတဲ့ အချိန်၊ မောင်လေးခံစားနေတဲ့ မျက်နှာလေး ကြည့်ချင်တာ အစ်မလည်း ပြီးတယ်”
ကျွန်တော်လည်း ကုတင်စောင်းမှာတင်ပြီး ဆောင့်ဆောင့် လိုးပစ်တာ။ ကောင်းတယ်ဗျာ ညှစ်ပေးထားတာ တင်းတင်းလေး။ ဖတ် ဖတ် စွိစွိ ဆိုတဲ့ အသံတွေတောင် ထွက်တာ စိပ်နေတာပဲ။ တစ်ချက်ချင်းဆောင့်တိုင်း အဆုံးထိဝင်တယ်။ ပြီးချင်လာတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး လရည်တွေ သွင်းပစ်လိုက်တော့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ စောက်ပတ်ထဲက ညှစ်ညှစ် ယူတာ အကုန်လုံးကို ကုန်ရော။ ကျွန်တော် တင်ပါး ခွက်နေအောင် ညှစ်ပြီး ထည့်ထားတာ။ မစိုးစိုးဆိုတာ အဲတော့မှ မျက်လုံးလေး စင်းကျတယ်။
တဲ့။ ကင်မရာလေး ရှေ့မှာပဲ စနိုးတာဝါလေးနဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို တယုတယ သုတ်ပေးတော့ ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ။ ကိုယ့်မိန်းမတောင် အဲလောက် မလုပ်ပေးသေးဘူး။
ဟာ အခုမှ သတိရတယ်။ နှင်းနှင်းတစ်ယောက် အဆင်မှပြေရဲ့လား မသိဘူး။ တော်ကြာ နိုးလာလို့ အော်လိုက် ဟစ်လိုက်မှဖြင့် ဒုက္ခဆိုပြီး မစိုးကို ပြောပြီး သွားမယ်လုပ်တော့
“သွားနှင့် လိုက်ခဲ့မယ် မောင်လေးရယ် ”
အခန်းက connection door ပါပြီး ဟိုဘက်က လော့ မချထားတော့ ဖြေးဖြေးချင်း ဝင်သွားလိုက်တယ်။ တံခါး ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးက မမြင်ဖူးတဲ့ မြင်ကွင်းလေး တစ်ခုရယ်။ တွေးထားပေမယ့် မြင်လိုက်ရတော့ ရင်တဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာတော့တယ်။
“အင့်… အဟင့်… ရှီးးးးးးးးးးးးး”
“ပလွတ်…… ဗွပ်….. ဗြလစ်……”
ကျွန်တော် မိန်းမလေးတော့ အမုန်း ဗျင်းခံနေရတာဗျာ။ ပျော့နေတဲ့ လီးတောင် ပြန်တောင်လာတယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ မိန်းမက ပက်လက်လှန်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက မိုက်ကယ့်ရဲ့ ပုခုံး နှစ်ဖက်ပေါ်မှာတင်လို့။ မိုက်ကယ့်လက်က ခါးကနေမတင်ပြီး အပေါ်ကနေ ဆောင့်ဆောင့်ချတာ။ အင့် ဟင့် ဆိုပြီး မျက်လုံးတွေ ကတော့ မူးလို့ မှိတ်နေတာပေါ့။ အသံကတော့ လူကသာ ဘယ်သူမှန်း မသိတယ်။ စောက်ပတ်ကတော့ လီးကိုသိတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကုတင်နောက်ဘက် သွားပြီး ကြည့်တော့ နှင်းနှင်းစောက်ပတ်ထဲ မိုက်ကယ့်လီးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရတော့တာပဲ။ လီးက တော်တော်ကြီးတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမ စောက်ပတ်ထဲက မိုက်ကယ့်လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရင် စောက်ပတ်သားတွေက လိပ်ပြီး ထွက်လာတယ်။ ဖင်ကြားထဲမှာလည်း စောက်ရေတွေဆိုတာ ပျစ်ချွဲချွဲ စီးကျနေတာ မြင်ရတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ မိုက်ကယ့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုစိပ်လာတယ်။ သူ့ယောက်ျား ရှေ့မှာ သူ့မိန်းမကို လိုးရတာ ဘယ်လောက်တောင် အရသာတွေ ရှိနေလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သာ စဉ်းစားကြည့်တော့။ ကျွန်တော့်လီးဆိုတာ မတ်မတ်ကိုထောင်နေတာပဲ။ အဲဒီ့အချိန် မစိုးစိုးလည်း ဝင်လာရော ကျွန်တော်လည်း connection Door ရဲ့ ဘေးနံရံမှာ တစ်ဖက်ကို ဆွဲလှည့်ပြီး ဖင်ကိုဆွဲပြီး ကော့စေလိုက်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးပစ်တာ သိပ်တောင် မကြာလိုက်ဘူး ခဏလေးနဲ့ ပြီးတာပဲ။
မိုက်ကယ်ကတော့ နောက်တစ်ချီ စဖို့အတွက် နှင်းနှင်း ပါးစပ်ကို ဟစေပြီး လီးစုပ်ခိုင်းနေတယ်။ နှင်းနှင်းကတော့ ပါးစပ်ပဲ ဟတာပါ။ မိုက်ကယ်ကတော့ လီးကို ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်နေတာပေါ့။ ကျွန်တော်နဲ့ မစိုးက ဆိုဖာပေါ်မှာ နားနေတော့ မိုက်ကယ်က နှင်းနှင်းရဲ့ ပျော့နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မှောက်ခုံလုပ်ချပြီး ကုတင်စောင်းမှာ ခြေထောက်ကို တွဲလောင်းကျနေစေပြီး သူ့အရပ်နဲ့ ချိန်၊ ကွန်ဒုံး တစ်ခုကိုဖောက်ပြီး အသေအချာစွပ်ပြီး ကျွန်တော့်မိန်းမ စောက်ပတ်ကို တစ်ရှူး နဲ့သေချာအရည်တွေကို သုတ်ပြီး ကုတင်အောက်ကနေ ကွပြီး သူ့လီးကို တစ်ချက်ထဲ အရှိန်ပျော့ပျော့လေး စိုက်သွင်း ချလိုက်တာ အဆုံးထိကို တန်းဝင်တာပဲ။
ကျွန်တောိ့မိန်းမ ပါးစပ်ကလည်း လေထွက်တဲ့ အသံကိုပါ တစ်ဆက်တည်း ကြားလိုက်ပြီး ခြေဖဝါးလေးတွေ ကုပ်သွားတာ ဖြည်းဖြည်းချင်း မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး။ ငါသူများဆော်ကို လိုးတာတောင် အားမရသေးပဲ ကိုယ့်မိန်းမကိုတောင် လီးကြီးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားက အားရပါးရ လိုးတာကိုတောင် စိမ်ပြေနပြေ ထိုင်ကြည့်နေမိသေးတယ်လို့။ တော်တော် မကောင်းတဲ့ လူပါဗျာ ကျွန်တော်ဆိုတာ။
မိုက်ကယ်ကလည်း ကျွန်တော့်မိန်းမ တင်းတင်းရင်းရင်းလေးကို တီးတာ ဒီတစ်ချီတော့ ခါးကိုပါ လွှဲလွှဲပြီးလိုးတာ လေပါထွက်တယ်။ ဘွတ် ဘွတ် ဘွက် ဘွက် ဆိုတာ ကျွန်တော့်မိန်းမထဲ သွင်းလိုက်တိုင်း ၄ ချက်လောက်ကို တစ်ခါလောက်ထွက်နေတာ။ ပြောသေးတယ် “မျိုး မင်းမိန်းမကို လိုးရတာ မိုက်တယ်” ဆိုပဲ။
ကောင်းတာတော့ ကောင်းမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဲလိုကြီးပြောတော့ ရင်ထဲ သိပ်မကောင်းဘူးရယ်။ မိန်းမကလည်း ကျွန်တော့်လိုကောင်က အကောင်းကြိုက် တဏှာကြီးတဲ့ကောင်က ရွေးယူထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ ဘယ်လို ပုံစံလေးများ ဖြစ်မလဲ စိတ်ကူးသာကြည့်တော့။ မိုက်ကယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲ သူ့လီး ဝင်ထွက်နေတာကို ကြည့်ပြီး အားရပါးရ ဆက်ဆံနေတာ။ နောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်လိုလက်ရလေး ကြည့်နေမိတယ်။ မိုက်ကယ်တော့ ငါ့မိန်းမကို ဘယ်လိုလေး လိုးရင် ကြည့်ကောင်းမလဲဆိုတာ တွေးလိုက် ကြည့်လိုက်နဲ့။ ဒါတောင် မနက်ကျတော့ တော်တော် ရှင်းရမယ်။ ကိုယ့်မှာသာ ဘယ်လို ရှင်းပြရမှန်း မသိတော့တာ။ အတိတ်ကတော့ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ အနာဂါတ်တွေသာ ရှေ့ဆက်ဖို့ ကျန်နေသေးတာ။
“ကို ပြောလေ ဘာလို့အဲလောက်ထိ ဖြစ်လာရတာလဲ..”
“တောင်းပန်ခိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး အကြောင်းအရင်းကို သိချင်တာ”
“ကိုရှင်းပြမယ် … စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီး နားထောင်၊ အရင်တုန်းကတော့ ကိုနဲ့ အတူတူ နေတုန်းက ပြောတာက ကိုလုပ်ရတာ အရသာ ရှိအောင်လို့”
“အင်း အဲဒါကတော့ ကိုက အစပျိုးခဲ့တာလေ ကိုတကယ် လုပ်မယ်မှန်းမှ မသိတာ၊ ပြီးတော့ ဒီလို လုပ်တယ် ဆိုတာ နှင်းဖက်က အဆင်သင့် ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာက ရှိသေးတယ်လေ”
“ကိုက အဆင်သင့် ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့ ဘယ်မေးရက်ပါ့မလဲ”
“သြော် မမေးရက်ဘဲ နဲ့ မူးနေတဲ့ မိန်းမကိုတော့ လိုးနေတာတော့ သေချာ ကြည့်နေတယ်ပေါ့”
“မပြောနဲ့တော့ မိုက်ကယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှန်း အခုသိပြီ ဖြစ်ပုံကိုသာ ရှင်းပြတော့”
(အပေါ်မှာ ရေးသားထားသော အကြောင်းများ) အချိန် အနည်းကြာသော်။
“ကိုမျိုး ရှင်က သူများကောင်မလေးကို လုပ်ရတာ အားမရသေးပဲနဲ့ ကိုယ့်မိန်းမကိုတောင် cuckold ဖြစ်အောင်ပါ လုပ်ပလိုက်တာပေါ့လေ”
“ကိုရှင်းပြဦးမယ်လေ အခုက ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ချင်တာလဲ နှင်းရယ်၊ ကို နှင်းကို အရမ်းချစ်တယ်လေ”
“နှင်းလဲ ကို့ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကို့ဖက်က သည်းခံမှ ဖြစ်တော့မယ်”
“နှင်းက ဘာတွေ လျှောက်လုပ်မလို့လဲ”
“ဒါတွေ လာမမေးနဲ့လေ ကိုတောင် ဘယ်လို ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားလေ၊ နှင်းဘာတွေပဲ လုပ်လုပ် ကို့ကိုတော့ ပေးသိမှာပါ”
“ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်ပါဘူး၊ ကိုလဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်နှစ်လောက်တော့ ကလေး မယူသေးဘူးနော်”
“လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ပြီးမှပဲ မိသားစု ဘဝလေးထူထောင်တော့မယ်”
“နှင်း သဘောပဲ နှင်းရယ်၊ ကို့ဖက်က မှားခဲ့တာပဲ”
“ရပါတယ် ကိုရယ်၊ အချစ်တွေတော့ မလျှော့ပါ့ဘူး အရင်လို ပါပဲ ကို”
ကိုမျိုးလက်တွေက နှင်းရဲ့ တင်ပါး လုံးလုံးလေးတွေကို ညှစ်ပြီး ဖြေးဖြေးလေး နမ်းနေတုန်း “ကိုလွှတ်တော့” ဆိုပြီး ဆတ်ကနဲ ရုန်းပြီး အခန်းထဲ ဝင်သွားပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ တံခါးပိတ်သွားတယ်။ ဟိုတစ်နေ့ညက ကိစ္စပြီးကတည်းက လင်မယား နှစ်ယောက် အတူတူ မအိပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ နှင်းဖက်က စပြီး အဝင်မခံတော့တာပါ။
နောက်တစ်နေ့ မိုးလင်းတော့ ကိုမျိုးလည်း အလုပ်ကို ထွက်လာလိုက်တယ်။ အလုပ်လေးတွေ ဘာတွေ လုပ်ပြီးတော့ နေ့လည်လောက်တော့ အလုပ်လေးတွေ လက်စသတ်ပြီး မိုက်ကယ့် အခန်းထဲကို ဖိုင်လေးတွေ သွားပို့ပြီးတော့ ကော်ဖီသောက် စကားလေး ပြောကြတာပေါ့။ မစိုးကတော့ မရှိပါဘူး။ company ရဲ့ အခွန်ကိစ္စလေးတွေ သွားလုပ်နေတယ်။
“မျိုး မင်းမိန်းမ ဘာပြောသေးလဲ…”
“ဘာမှတော့ မပြောဘူး ဒါပေမယ့် ငါတို့တော့ အတူတူ မအိပ်ဖြစ်တာ ရက်နည်းနည်းတော့ ရှိပြီ..”
“ဒါဆိုရင်တော့ မင်း စည်းရုံးတာ အောင်မြင်တာပေါ့”
“အောင်မြင်တာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ မင်းနဲ့နေတုန်းကတော့ သူက မူးနေတာလေ။ အဲတော့ ပုံမှန် အခြေအနေ မဟုတ်တော့ သူ့စိတ်ထဲ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတော့ မှန်းရခက်တယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ဘာပြသာနာမှတော့ မရှိပါဘူး ထူးထူးခြားခြားတော့ မဖြစ်ခဲ့ဘူး”
“ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ငါတို့နှစ်ယောက်လုံး ကံကောင်းပါတယ်၊ မင်းမိန်းမကော စိုးကော နှစ်ယောက်လုံးက တော်တော် တောင့်တဲ့ မိန်းမတွေပဲ”
“ငါ့မိန်းမကတော့ ငါနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖူးတာလေ”
“အဲဒါကြောင့် ငါလိုးနေတုန်းက တင်းကြပ်နေတာ”
“ဟင်” (ဒီကောင် …..)
“စိုးကတော့ အတွေ့အကြုံ စုံတယ်၊ ဘယ်လို လုပ်ပေးရင် ကျေနပ်စေမယ်ဆိုတာ စိုးကောင်းကောင်းသိတယ်”
“ဟုတ်တယ်..” (သေချာတာပေါ့ မစိုးနဲ့ပြီးတဲ့ အချီတွေက တော်တော် ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်)
“ကဲ ငါလုပ်စရာရှိတာလေး လုပ်ဦးမယ်”
ဆိုပြီး သူ့အခန်းထဲက ထွက်လာလိုက်တယ်။ ညနေ5နာရီလည်း ထိုးပြီ။ မစိုးကတော့ ရုံးပြန်မလာတော့ဘူးလို့ ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း ပြန်ခါနီး အခန်းတံခါး ခေါက်သံကြားလို့ သွားလဲဖွင့်ရော
” နှင်း.. ဘာလာလုပ်တာလဲ ……”
မိုက်ကယ်ကလည်း အခန်းကနေ ထွက်လာတာနဲ့ လှမ်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ (စကားပြောများကို english လို မရေးပဲ မြန်မာလိုပဲ ရေးပါ့မယ် )
“ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်… မင်းယောကျ်ားကို လာကြိုတာလား…”
“တခြားကိစ္စလေးလဲ ရှိလို့ ဝင်လာတာပါ”
“နှင်း.. ပြော မလာစဖူး လာလို့ပါလား”
“ရုံးက ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်ထဲလား”
“အင်းလေ… မစိုးကတော့ ရုံးပြန်မလာတော့ဘူး ကျန်တာတွေက ပစ္စည်းပို့မှ warehouse မှာပဲ ရှိတာလေ”
“အင်း…. ရုံးက 5:30 ဆင်းမှာလား”
“အင်း ဆင်းလို့တော့ ရပါပြီ ….”
“မိုက်ကယ်က ဘယ်တော့ ပြန်တာလဲ”
“မပြန်ဘူးလေ သူက ဒီမှာပဲ သူနေတာလေ ဟိုဖက်ခန်းလေ”
“ဘယ်သွားမလို့လဲ ရုံးကတော့ ဘယ်သူမှ မလာတော့ဘူး… သွားမယ်လေ ပြန်လို့ရတယ်”
“ကို.. နှင်း မိုက်ကယ်အခန်း သွားမလို့”
“နှင်းပြောတာ သေချာနားထောင် .. ကို အပြင်ကပဲ စောင့် အခန်းထဲ လိုက်မလာနဲ့။ ဟိုနေ့က မိုက်ကယ်နဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာ .. နှင်း ဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူး..”
“နှင်းက ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲ”
“အစကတော့ ဒီလာတာ မိုက်ကယ်ကို အိမ်ခေါ်သွားမလို့ပဲ၊ သူက ဒီမှာနေတာဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့”
“နှင်း သေချာစဉ်းစားဦးနော် ….”
“သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ထွက်လာတာ…. မိုက်ကယ့်ကို သွားပြောပေး နှင်းက english လို နည်းနည်းပဲ ရတာလေ ပြောတာပဲ နားလည်တာ”
“အင်း ငါ့ အခန်းထဲမှာပဲ လုပ်ကြတာပေါ့၊ ကွန်ဒုံးကတော့ တစ်ခုလောက်တော့ ကျန်သေးတယ်”
ငါ့မိန်းမကို လိုးမယ့်ကောင်ကို ကွန်ဒုံး သွားဝယ်ပေးရမယ်လို့။ ကျွန်တော်လည်း သွားဝယ်မယ် ဆိုပြီး အထွက်
“ဟိုဟာလေ မဝယ်နဲ့တော့ နှင်းဖက်က စိတ်ချရတယ်၊ ပြီးတော့ ရာဘာရဲ့ အရသာက ပူတယ်၊ ကို့ကို ခွင့်ပြုစေချင်တယ်…”
“နှင်းရယ် လုပ်မယ့်လုပ်တော့လဲ ကိုမျှော်လင့်ထားတာထက်တောင်”
“ဒီအချိန်မှာ ဒါတွေ ပြောမနေပါနဲ့တော့ ကိုရယ် .. လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်မှတော့ ကောင်းကောင်း လုပ်တော့မယ် ကိုရယ်၊ ကိုပဲ အစပြုခဲ့တာ မဟုတ်လား”
“နှင်း အဆင်ပြေသလိုသာ လုပ်တော့ နှင်းရယ်”
နှင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ မိုက်ကယ် အခန်းဖက် လှည့်တော့ မိုက်ကယ်က အခန်းဝက ထွက်ပြီး လာ ဟန်နီ ဆိုပြီး ခါးလေးကို ပွေ့ပြီး အခန်းထဲဖက် ခေါ်သွားတော့တယ်။
“မျိုး မင်းကော အဆင့်သင့် ဖြစ်မလား၊ မင်း အိုကေရင် အခန်းထဲ လိုက်ခဲ့လေ”
“ငါ ခဏနေမှ လိုက်ခဲ့မယ် .. ငါ့ အတွက်တော့ အချိန် နည်းနည်းလောက်ပေးပါ”
“အိုကေလေ မင်းဖက်က ဒါ့အတွက် ပြသာနာ ရှိမယ်ဆိုရင် ငါဒါကို ဆက်မလုပ်ပါဘူး”
“ရပါတယ် ငါ့အတွက်ကတော့ အဆင်ပြေအောင်တော့ ကိုယ့်ဖာသာ ကြိုးစားနေရတုန်းပဲ”
“အေးပါ ငါ တံခါးစေ့ထားခဲ့မယ် မင်းဝင်လာခဲ့ပေါ့၊ ဟန်နီလို့ ခေါ်တာတော့ ခွင့်ပြုစေချင်တယ်”
“မင်း အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် စတော့မလား…”
ဆိုပြီး နှင်း အင်္ကျီတွေ စချွတ်လိုက်တယ်။ မိုက်ကယ်က
“မင်း စကတ်ကိုတော့ မချွတ်ပဲနဲ့ အတွင်းခံနဲ့ပဲ လိင် ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမလား”
မိုက်ကယ်က အဝတ်အစားအကုန် မချွတ်တဲ့ မိန်းကလေးကို ဆက်ဆံရတာကို နှစ်သက်တယ်နဲ့တူတယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ ဘောင်းဘီရှည်ကို အကုန်ချွတ်လိုက်ပြီး အောက်ခံအင်္ကျီ နဲ့ ဘောင်းဘီကိုတော့ ဝတ်ထားတုန်းပဲ။ နှင်းလည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ကုန်းပြီးချွတ်တုန်း မိုက်ကယ်က နောက်ကနေ ခါးကို လှမ်းဖိလိုက်တယ်။
မိုက်ကယ့်လျှာက နှင်း စကပ်လေးကို လှန်တင်ပြီး ပိပိဖောင်းဖောင်းလေးကို လာဆွဲစုပ်တယ်။
နှင်းတစ်ကိုယ်လုံးက ကုတင်ပေါ်မှာ မဟုတ်ပဲ ကုတင်ဘေးနားလေးမှာဆိုတော့ လူက အမှုတ်လည်း ခံနေရတော့ ပျော့ခွေပြီး ယိုင်ကျချင်လာတယ်။ မိုက်ကယ်က အလိုက်သိသိနဲ့ ခေါင်းကို ခွာပြီးတော့ နှင်းကို ကုတင်ဖက်ကို လှည့်စေပြီး ကုတင်ပေါ်တတ်လိုက်ဆိုတော့ နှင်းလည်း ကုတင်ပေါ်ကို အတက်။ မိုက်ကယ်က နှင်း ဒူးနှစ်ဖက် ကုတင်အပေါ်ကို အရောက်မှာပဲ ရပြီဆိုတော့ ကုတင်အောက်ကနေ ဆော်မယ်ဆိုတာသိတော့ ကြက်သီးတောင်ထတယ်။
ပြန်ကျချင်သလို ဖြစ်နေတဲ့ စကတ် အစလေးကို မိုက်ကယ်က အပေါ်ကို လှန်တင်လိုက်တယ်။ နှင်းက အလိုက်သိသိနဲ့ ခါးလေးကို ခွက်ပေးလိုက်တယ်။ သေချာတယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပဲ နောက်ကို စူထွက်နေမှာတော့ သေချာတယ်။
အခုလို မမူးပဲနဲ့ အလုပ်ခံရတော့မှာရယ်၊ ကိုယ့် ယောကျ်ားကလည်း အပြင်မှာ ရှိနေတယ်။ နှင်း မမှားပါဘူး ကိုရယ်။ ကို ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေ နောက်မှာ နှင်းအခု အရည်တွေ ရွှဲနေပြီကွယ်။ မိုက်ကယ်က နှင်းနောက်မှာ မလုပ်သေးပဲနဲ့ နှင်း ဖင် ပေါက်လေးကို ဖြဲကြည့်နေတယ်။
“အား… ယားတယ် … ကောင်းတယ်ကွာ”
ဖင်ဝ တစ်ခုလုံးကို လျှာနဲ့ အယက်ခံလိုက်ရတယ်။ တကယ်ကို ကောင်းတယ် တစ်ချက်လောက်တော့ တွန်းမိလိုက်သေးတယ်။ တံတွေးတွေက ဖင်ဝတွေမှာကော ပိပိ စောက်ပတ် အဝမှာကော ရွှဲစိုနေပြီ လေ။ တံတွေးကြီးပဲ သီးသန့်တော့ မဟုတ်ဘူးရယ်။ နှင်းရဲ့ အရည်တွေလဲ ပါတာပေါ့။ ဒီလောက် လုပ်မှတော့ အရည်မထွက်ပဲ ခံနိုင်မလား။
“အင့် …. ကောင်းလိုက်တာ”
လျှာကို အတောင့်လိုက် လုပ်ပြီး ထိုးချတာ ဖင်ဝကချော်ပြီး စောက်ပတ်ထဲ ဝင်သွားတယ်။
“မိုက်ကယ် ငါ ဝင်လာပြီ”
နှင်းခေါင်းလေး တစ်ခြမ်းစောင်းပြီး ကျွန်တော့်ကို လှည့်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော် နောက်ကနေ မကြည့်ချင်တာနဲ့ပဲ ကုတင်ခေါင်းရင်းဖက်ကို သွားပြီး နှင်း ခေါင်းလေးကို ပွတ်ပြီး
“နှင်း အဆင်ပြေရဲ့လား ….”
“Immensely ပါပဲ ကိုရယ် …”
နှင်းရဲ့ မျက်နှာလေးက တဏှာ အခိုးအငွေ့လေးတွေ့ပြည့်နေတော့ ခေါင်းလေးကို ဆွဲပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းမိလိုက်တယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ နောက်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်ပါပြီ။ ပြီးတော့ တံတွေးတချက် ထွေးပြီး လီးပတ်ပတ်လည် နဲ့ ဒစ်ကို ပွတ်ပြီး အရည်ရွဲအောင် လုပ်လိုက်တယ်။ ရှေ့မှာကတော့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ အချစ်တွေ ဖလှယ်နေတယ်။ ဖူးဖောင်းနေတဲ့ စောက်ပတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ လီးက တစ်ချက် ဆတ်ကနဲ တုန်တယ်။ နှင်းရဲ့ ခံစားမှုပျောက်သွားလို့သတိရပြီး ကိုနဲ့ နမ်းနေရာကနေခွာပြီး နောက်ကို လှည့်ကြည့်တော့ တော်တော်ကြီး ထွားပြီး ကော့ လန်နေတဲ့ လီးကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်နေတဲ့ မိုက်ကယ်ကို တွေ့ရတယ်။
မိုက်ကယ်က ရှေ့ကို တစ်လှမ်းတိုးပြီး နှင်းခါးလေးကို ကိုင် စောက်ပတ်ဝမှာ တေ့လိုက်တယ်။ နွေးပြီး တင်းနေတဲ့ ဒစ်ရဲ့အရသာကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကို့ကို လှမ်းကြည့်တော့ ခေါင်း ညှိမ့်ပြတယ်။ နှင်းမျက်လုံးတွေက ကို့ကို ကြည့်နေမိတယ်။ လီးက အရှိန်ကို မပြင်းစေပဲ ခပ်ပျော့ပျော့ စိုက်ပြီး နှင်း စောက်ပတ်ထဲ တိုးဝင်လာတယ်။ နှင်းမျက်လုံးလေးတွေ ပြူးပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး မျက်နှာလေးတွေ နီလာတယ်။
မိုက်ကယ် အဆုံးထိ တစ်ချက်ထဲထည့်တော့ နှင်း စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေပါ လိပ်ပြီး ဝင်သွားတာ။ မိုက်ကယ်က အရသာခံပြီး ကြည့်လိုးနေတာပေါ့။ အဆုံးထိဝင်သွားတော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက လီးတစ်ချောင်းလုံးကို စုပ်ခွက်တစ်ခုလို ဖုံးဖိထားတယ်။ မကျက်တစ်ကျက်ဖြစ်နေတဲ့ နှင်း စောက်ပတ် အောက်နားလေး နည်းနည်းကွဲနေတာလေး ပြန်ဟသွားတာ မိုက်ကယ်တွေ့သွားတယ်။ လေးဖက်ထောက်ထားတာ ဆိုတော့ တော်တော် ရှင်းတယ်မြင်ရတယ်။
နှင်းဖင်ဝလေးကိုလည်း တစ်ချက်လောက် သေချာစိုက်ကြည့်ပြီး တံတွေးတစ်ချက် မြိုချလိုက်တယ်။ နီစွေးစွေး ဖင်ဝလေးက ချလိုက်ရရင် တော်တော် ကောင်းမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အချိန်တော့ ယူရလိမ့်မယ်။ စောက်ပတ် ထည့်တာတောင် နည်းနည်းကွဲတာ ဆိုတော့ စိုးစိုးကို ချတုန်းကတောင် တော်တော် သွင်းရတာ။ လီးကို နှင်းစောက်ပတ်ထဲ ခဏတော့ စိမ်သေးတယ်။ နှင်းနောက်ကျောက ဘော်လီ ကလစ်ကလေးကို ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်။
နို့တွေကို ခြေ မွပေးဖို့ ကိုမျိုးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကို မျိုးက အလိုက်တသိနဲ့ နှင်းနို့လေးတွေကို ပွတ်သပ်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဆော့ကစားပေးနေတယ်။ ကိုမျိုး ပေါင်ကြားကို ကြည့်တော့လည်း ဖောင်းထနေတယ်။
“ဗြွတ် … ဗြိ … စွတ် … စွတ် … ပတ် … ပတ်…”
“ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်၊ မိုက်ကယ်က… အ… အ..ရမ်း..လိုး…တာ ကောင်းတယ် ပြည့်ကြပ်…နေတာပဲ”
နှင်းလဲ နောက်ကို အလိုက်တသိနဲ့ ဖင်ကို ပြန်ပြန် ပြီး ကော့ကော့ပေးတယ်။
နှင်းကို ပက်လက် လန်စေပြီး ကုတင်စောင်းလေးကို ဆွဲယူဖို့ လုပ်တော့ နှင်းစောက်ပတ်ထဲက ကျွတ်ထွက်လာတဲ့ လီးကြီးကတော့ နှင်းစောက်ရည်တွေ စိုလို့။ ပိုတောင် ကြီးလာသလိုပဲ။ အကြောတွေဆိုတာ ထောင်ထနေတာ။ အဲ့ဟာကြီးကို ကြည့်ပြီး….
“အင်းး.. နှင်း အဆင်ပြေနေတာပဲ မတော်လို့မှမဟုတ်ပဲ”
“အာ….. ကိုကလဲ” (နှင်း ရှက်ဝဲဝဲ မျက်နှာလေးက တော်တော်ကြာ အလိုးခံပြီး စောက်ပတ်ထဲ က ထွက်မှပဲ ကျွန်တော် မိန်းမက ရှက်ရတယ်လို့.. အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် နှင်းရယ် )
မိုက်ကယ်က နှင်းကို ပေါင်ကားစေပြီး ကိုက နှင်းခေါင်းအောက်မှာ သူ့ပေါင်လေးကို ခံပေးထားတယ်။ ခေါင်းက အောက်ကိုလှမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ အနေအထားလေ။ နှင်းပေါင်နှစ်လုံးကို သေချာဖြဲပြီးတော့ စောက်ပတ် လျက်ပေးနေသေးတယ်။
“ကောင်းတယ် မိုက်ကယ်ရယ်.. ဟိုနေ့က လိုးတုန်းကတော့ နှင်းဘာမှ မသိလို့ ဒီလောက်ကောင်းတာကြီးကို မခံစားလိုက်ရဘူး”
လျှာကို အပြားလိုက်ထားပြီး စောက်ပတ် တစ်အုံလုံးကို လျက်ပေးတာ။ ကောင်းတယ် ဖင်ကြားထဲကနေ လျှာကြီး တက်လာပြီး စောက်စိထိတော့မှ စောက်စိကို ဆွဲစုပ်တယ်။
“အင်းးးးး ကောင်းးးးတယ်….. ဘယ်လို လုပ်နေတာလဲ။”
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကိုမျိုးက သူ့ဘောင်းဘီကို ဖင် တဝက်လောက် ဆွဲချွတ်ပြီး နှင်းကို ကြည့်ပြီး ဂွင်းထုနေတယ်။ နှင်းခေါင်းအောက်ကိုတော့ ခေါင်းအုံးလေး ထိုးထည့်ပေးတယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ စိတ်ကြိုက်ပေါ့။ ပေါင်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ပူးကိုင်ပြီး ရင်ဘတ်ထိရောက်အောင် တွန်းထားပေးတယ်။ ဒူးခေါက်ခွက်လောက်ကို ကိုင်ပြီး မှုတ်ပေးနေတုန်းပဲ။ ကိုမျိုးကတော့ ဘောင်းဘီ တစ်ဝက်နဲ့ နှင်းခံစားနေတာလေးကို ကြည့်ပြီး လီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုက်ပေးနေတယ်။
“အာ….. အောင့်တယ် ဖြေးဖြေး အထဲမှာ အရမ်းကြပ်နေတယ်”
ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပူးပြီးထည့်တော့ ကြားထဲ ကစောက်ပတ် နှစ်ခမ်းသားလေးတွေက ညှပ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး အကုန်ဝင်သွားတော့
ကျားကြီး မာန်ဖီတဲ့အတိုင်းပဲ …။ ပြီးလဲပြီးရော ခွေးထီးကြီးက ခွေးမကြီးကို အားရပါးရဆောင့်သလို နှင်းပက်လက်အနေအထားမှာပဲ မိုက်ကယ်က ကုတင်အောက်ကနေ ကုန်းပြီး နှင်းဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကို ထောက်တဲ့ ပုံစံပြောင်းပြီး ဆောင့်တော့တာပဲ။ နှင်းရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး လိုးနေရင်း နှင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမလေ မိုက်ကယ့်ကိုဖက်ထားပြီး အားရပါးရလိုး နေကြတော့ ကျွန်တော်တောင် ပြီးချင်သလို ဖြစ်သွားလို့ လက်က လီးကို လွှတ်ပြီး ရပ်ထားလိုက်ရတယ်။
“ပတ်… ပတ်…. ပြွတ်..စွိ..”
မိုက်ကယ်က နှင်းပေါင်နှစ်ချောင်းကို အပါ်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့ဖင်လေးကို ကော့ပြီး လိုးလိုးပေးနေတယ်။ နှင်း တစ်ချီကောင်းကောင်းပြီးသွားလို့ သူအရှိန်လျှော့ပြီး ဖြေးဖြေးလေး လိုးပေးနေတယ်။
“မိုက်ကယ် မင်းပြီးချင် ပြီးတော့လေ ရတယ်”
“ငါ မင်း မပင်ပန်းတဲ့ ပုံစံလေးပြောင်းပြီး လိုးချင်တယ်”
မိုက်ကယ်က နှင်းကို ကုတင် အလယ်လောက်မှာ မှောက်ခုံဖြစ်အောင် နေရာပြောင်းပေးပြီး သူက ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်တဲ့ ပုံနဲ့ အပေါ်က ခွခွပြီးထည့်တာ အဆုံးနီးပါးလောက်ထုတ် ပြန်ထည့်နဲ့
“မျိုး မင်း မိန်းမက တောင့်တော့ ဒီပုံစံကို ငါတော်တော်ကြိုက်တယ်”
(နှင်းနှင်းကတော့ ဘယ်လို ပုံစံလေးလဲဆိုတော့ စာဖတ်သူတွေ မျက်လုံးထဲ မြင်အောင်ပြောရင် ပိုပိုဟေသာလိုပုံ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ရော ရုပ်တော့ နည်းနည်းပဲ ဆင်တယ် နှင်းနှင်းက ပို လှတယ်။ ပုံစံပြောပြချင်သာ ဖြစ်သည်…)
ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးရဲ့ ပေါင်စိထားတဲ့ ကြားထဲက အကွဲလေးထဲ မိုက်ကယ့်လီး ဝင်ထွက်နေပြီး သိပ်မကြာပါဘူး မိုက်ကယ်လည်း ပြီးတော့တာပါပဲ။ နှင်းနှင်းကတော့ ဘယ်လို ပြောရမလဲဆိုတော့ ထပ်ပြီးတာပေါ့။ မိုက်ကယ်လည်း ကျွန်တော့်မိန်းမပေါ် မှိန်းပြီး လီးစိမ်ထားပြီးတော့ မှောက်ချလိုက်တယ်။ ဖင်ကတော့ ညှစ်ပြီး လရည်တွေ အကုန်ထည့် နေသလိုပဲ။ မိုက်ကယ်က ခဏနေပြီး ထသွားတော့ နှင်းနှင်းက မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဇိမ်ခံနေသေးတယ်။
ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တော့ပဲ နှင်းနှင်း ဖင်သားတွေက ဖြဲလိုက်တော့ မိုက်ကယ့်လရည်တွေက ကျွန်တော့်မိန်းမ စောက်ပတ်ဝမှာ ပြူနေတယ်။ အရည်တွေကိုတော့ တွေ့နေတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ဖြစ်သွားတယ် မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း နှင်းနှင်းပေါ်ကို ခွ ၊ မိုက်ကယ့် လရည်တွေ ကို ရွံရကောင်းမှန်းမသိပဲ ကျွန်တော့်လီးကို ထိုးထည့်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်တော့တာပဲ။ လရည်တွေကများတော့ အပြင်တွေလည်း ကန်ထွက်တယ်။ စိမ့်ပြီးလည်း ထွက်တယ်။ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံမှာလဲ မိုက်ကယ့် လရည်တွေတောင် စင်တယ်။ လိုးလို့ကောင်းတယ်ဗျာ …။ ဒီတစ်ခါလောက် ကောင်းတာ မရှိဘူး။
“နှင်း ကောင်းတယ်.. နှင်းကော”
“ကို ထည့်ပါ့ထည့်ပါ့မလားဆိုပြီး နှင်း မျှော်လင့်နေခဲ့တာပါ…။ ကို့လီးကို မိုက်ကယ်နဲ့ လိုးပြီးထည့်တော့ မှပဲ ကို့ကို အရမ်းကို ပိုချစ်သွားပြီ….။ ဆောင့်ပေးပါ ကိုရယ် နှင်း အရမ်းကောင်းနေတယ်”
“နှင်း ကို ပြီးတော့မယ်”
“နှင်း ပါးစပ်ထဲ ပြီးလိုက်ပါ ကိုရယ်”
နှင်းကို ပက်လက်လှန်ပြီး နှင်းပါးစပ်ထဲ ကိုမျိုးလီးကို ထည့်လိုက်တော့ နှင်းလည်း အားရပါးရ စုပ်ပေးတုန်း ကိုမျိုးလည်း လရည်တွေ ထွက်ကုန်တော့ နှင်းလည်း တစ်စက်မကျန်အောင် မျိုချလိုက်တယ်။ ကို့ရဲ့ ပေါင်က ဟာတွေကော လဥက အရည်တွေ ကော လျှာနဲ့လျှက်ပြီး အကုန်မျိုချလိုက်တယ်။ ကိုမျိုးနဲ့ မိုက်ကယ်ကတော့ နှင်းကို ရှုထောင့် တစ်နေရာစီက ကြည့်လို့။ နှင်းနှင်း မျိုလိုက်တဲ့ လရည်တွေကတော့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ လရည်တွေ ဖြစ်နေမှာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း စဉ်းစားမိမှာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ပြီးသွားချင်ပေမယ့် မစိုးရဲ့ လင်တော်မောင် ကိုမောင်ရဲ့ ပြန်လည်ဆက်သွယ်မှု ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့မိဘတွေဆီက တဆင့်ပေါ့။
ဘာလို့ဆက်သွယ်တာလဲဆိုတော့ ကျွန်မမွေးထားတဲ့ ကိုမောင်ရဲ့ သားလေးဟာ ကိုမောင်နဲ့မှ ချွတ်ဆွတ်လေ။ သူနဲ့ပဲ ရခဲ့တာပါ။ သူကမှ မယုံတာ။ သားလေးရဲ့အဘွားဆိုတာ အရင်တုန်းကတော့ အဝင်အထွက် မရှိပေမယ့် သွေးကစကားပြောလာတော့လည်း ပြန်လည်ပြီး တောင်းပန်တဲ့ မျက်လုံးတွေကို မြင်နေရတယ်။ ကိုမောင်ကတော့ သူ့ဘက်ကတော့ ပြန်ပက်သက်ချင်တဲ့ အမှုအရာတွေ ပြပေမယ့် အဲလောက်တော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ သူနဲ့ ကျွန်မနဲ့ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က သူလိုးတဲ့ဟာ ကျွန်မဆီပို့ ကျွန်မလုပ်တာလည်း သူ့ဆီပို့ဆိုပြီး လုပ်ထားခဲ့တော့ သူလည်း ဘယ်လောက်တောင် ကျွန်မကို ရွံရှာနေမယ်လို့ ကျွန်မ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။
“ပြော ကိုမောင် နေကောင်းတယ်မလား၊ ကောင်မလေးနဲ့ကော အဆင်ပြေတယ်မလား”
“အဲဒါတွေက အပျော်တွေပါ …”
“ကိုမောင် စိုးနဲ့ ပြန်ပေါင်းချင်တယ်”
“ရှင်…….” (ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ စကားလေ)
“ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့၊ အပြစ်ဆိုတာ မြင်တဲ့လူမှပဲ အပြစ်ဖြစ်တာပါ၊ ကိုက စိုးလုပ်ခဲ့တာတွေကို အပြစ်လို့မှ မမြင်တာ”
“ကိုမောင် မသိတာတွေ အများကြီးပဲ”
“စိုး ဘာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ..”
“တစ်ခါနာဖူးသား…. .ကိုယ့်ရင်နဲ့ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီး မွေးခဲ့တာကိုတောင် ကိုမောင် မယုံကြည်နိုင်အောင် သံသယတွေ ရှိခဲ့တာပဲ ပြီးတာတွေတော့ ပြီးပါစေတော့ …. သားလေးကိုတော့ လာတွေ့ပါ စိုးခွင့်ပြုပါတယ်”
တစ်ယောက်ထဲ စဉ်းစားရတာခက်တယ် ဆိုပြီး အလုပ်ကျတော့ ကိုမျိုးနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်တယ်။ သူ့ကိုလဲ ကိုယ့်ကိစ္စတွေ ပြောပြပြီး အကြံတောင်းခံကြည့်တာပေါ့လေ။ ကိုမျိုးကတော့
“အစ်မဖက်က တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်မေးပြီး ဆွေးနွေးကြည့်ပေ့ါ၊ မမရဲ့ မိဘတွေကကော”
“အရင်ကတည်းကလဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာလေ၊ အမေတို့ကတော့ မမ ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်ပြေမယ် မိသားစုစိတ်ချမ်းသာမယ် ဆိုရင်တော့ ကြိုက်တာသာလုပ် ဘာမှတော့ မပြောပါဘူး”
“အခုတောင် မြေးလေးရှိလို့သာ တရားစခန်းကို အလှည့်ကျ သွားနေကျတာ အဖေကတော့ ဘာမှန်းတောင် သိတာမဟုတ်ဘူး”
“သူ့ကိုတော့ cuckold ဖြစ်မလား မဖြစ်ဘူးလား အစ်မသိလား တကယ်လို့ ဖြစ်နေရင်ကော”
“တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် ဆွေးနွေးတာကတော့ ကောင်းပါတယ်၊ မိုက်ကယ့်နဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြလိုက်ပေါ့၊ သူတောင် အစ်မနဲ့တုန်းက ကောင်မလေးတွေနဲ့ဖြစ်တာ မမခွင့်ပြုခဲ့တာပဲ ကြိုးစားကြည့်ပေါ့”
“အရင်တုန်းကလို စိတ်တော့ မမာတော့ပါဘူး၊ အဓိကကတော့ သားလေးပါပဲ၊ အဖေနဲ့တူတူ ကြီးပျင်းလာရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့၊ မိစုံဖစုံ ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတယ် ”
“မမ သဘောပါပဲ ..”
“အင်း.. မမ ဒီတစ်ခါတွေ့ရင် မေးကြည့်ပါဦးမယ်”
“ဟိုတစ်ခါပြောသလို အရာအားလုံးကို အရင်လို ပြန်ဖြစ်စေချင်တာလား”
“စိုးကတော့ ပြောရရင်တော့ မတွေ့ရတဲ့ အချိန်တွေ အတွင်းမှာ ကိုမောင် မသိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိတယ်”
“ပြောကြည့်လေ ကိုမောင် နားထောင်ရတာပေါ့”
သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ကိုမောင်ရဲ့ အိမ်လေးမှာ စကားပြောဖြစ်နေတာပါ။ အောက်ထပ်မှာတော့ ကိုမောင့်အမေ နဲ့ သားကတော့ ဆော့နေကြတယ်။ အပေါ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောရအောင် ရှောင်ပေးထားတယ်။
“ကိုမောင့်ကို ပြောရရင် စိုး အခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်က မိုက်ကယ်နဲ့….”
“သြော် ကိုထင်တာထက်တောင် စိုးက လက်စောင်းထက်နေတာပေါ့”
“ဒီလိုပါပဲ ကိုယ်ရှင်သန်နေတဲ့ ကမ္ဘာထဲမှာတော့ ပျော်ရွှင်အောင် နေခဲ့ရတာပေါ့”
“ဘယ်လိုလဲ သူတို့နဲ့ ကိုနဲ့”
“ဘာကို သိချင်တာလဲ ဘာလို့မေးတာလဲ”
“တူတူနေတာ ဘာကွာခြားလဲ၊ စိုးပြောတဲ့ မိုက်ကယ်ရယ် ဟိုတစ်ခါ ဗီဒီယိုထဲက တစ်ယောက်ရယ်”
“နှစ်ယောက်လုံးကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေချည်းပါပဲ၊ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စမှာလဲ ဆရာရယ်လို့လဲ မရှိတော့ ကိုယ်စိတ်ကျေနပ်အောင်ပဲ လုပ်ကြတာပဲ နှစ်ယောက်လုံးကိုတော့ satisfied ဖြစ်ပါတယ်”
“စိုးကကော အခု ကိုနဲ့ ပြန်ပေါင်းစည်ဖို့ အကြောင်းကောရှိလား”
“စိုးပြောရရင်တော့ ဒဏ်ရာတွေလို့ ထင်နေရင်တော့ အမာရွတ်ပဲ မြင်နေမှာလေ။ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လို တွေးရင်တော့ အမာရွတ်ဆိုတာ အောင်မြင်မှုအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အမှတ်အသားလေ။ စိုးက ဒဏ်ရာတွေ များတယ်…။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်တယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ဖာသာ ထင်မှတ်ပါတယ်”
“ကိုလည်း စိုးနဲ့ အတူတူပါပဲ”
ကိုမောင်က စိုးကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲဖက်လိုက်တယ်။ ကိုမောင်က
“စကားတွေ ပြောမနေပါနဲ့ စိုးရယ်”
ဆိုပြီး အပေါ်ထပ် လှေကားနားက အခန်းထဲကို ဆွဲခေါ်သွားတယ်။
“စိုး…. ကို့ကို ခွင့်ပြုပါ..”
မိနစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်အစားတွေ မရှိတော့ဘူး။ ပုံစံကတော့ 69 ပေါ့။ စိုးစောက်ပတ်လေးကို ကိုမောင်တစ်ယောက် သေချာကြည့်တော အရင်လိုပါပဲ။ လှနေတုန်းပဲ။ မျက်လုံးထဲ မြင်ရတာကတော့ စိုးအရင်ပို့လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုထဲက မြင်ကွင်းတွေ။ စိုးပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ။ လီးကမတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတော့ လီးစုပ်ပေးနေတဲ့ စိုးတောင် အာခေါင်ထဲမှာ လှုပ်သွားတယ်။ သီးမလို ဖြစ်သွားလို့ မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်။
နောက်တော့ ကိုမောင့်နှုတ်ကမေးလာတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို စိုးဖြေမိတယ်။ လေးဖက်လေး ထောက်လို့ပေါ့။ စိုးလေးဖက်ထောက် ဖင်ထောင်လိုက်ရင် ပြူထွက်လာတဲ့ စောက်ပတ်နဲ့ စောက်စိလေးတွေကို မြင်တဲ့ကောင်တွေ ပြေးမလိုးပဲ နေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
“ကိုရယ် ဘယ်နေပါ့မလဲ လိုးတာတောင် ဆောင့်ဆောင့်လိုးတာ။ သူတို့က ညှာတာ မဟုတ်ဘူး။”
“စိုးကလည်း အဲလို လိုးတာကို ကြိုက်တာမလား။”
“အင့်…. ဖွတ်….. ပတ် ပတ် ပတ်”
“အဲ့ထက်တောင် ပြင်းသေးတယ်၊ မိုက်ကယ်ဆို လီးကြီးလို့ စိုးဆို တစ်ခါတစ်ခါ ဖင်ထောင်လိုးခံပြီးရင် ပျော့ခွေသွားတာပေါ့”
“ကောင်းတယ်ကွာ စိုးရယ် လိုးရတာ အရမ်းကောင်းတာပဲ”
ကိုမောင်က သူ့လီးကို စိုးစောက်ပတ်ထဲမှာ တင်းပြတော့ အတွင်းသားတွေက ခံစားမိတယ်။ သူ တကယ် ကောင်းနေတာပဲ။ ကိုမောင်ကောင်းနေရင် အရင်တုန်းကလည်း အဲလို လုပ်တတ်တယ်။
“ဟင် အရင်တုန်းကတော့ ကိုတို့တစ်ခါစမ်းတုန်းကတော့ သိပ်လုပ်လို့မကောင်းဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ စိုး ဖင်ခံချင်လို့လား”
“အင်း နှစ်ပေါက်လုံးခံချင်တာ၊ နှစ်ယောက်က စိုးကို နှစ်ပေါက်လုံး လိုးတာ ခံချင်တာ ကိုမောင်ကသာ ခွင့်ပြုရင်ပေါ့”
“စိုး.. အားးးးး တကယ် ပြီးတော့မယ် အရမ်းချစ်တယ် စိုးရယ်”
“စိုးလည်း အတူတူပါပဲ ….. အခုအထဲမှာ အရည်တွေ အများကြီးပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ sex မလုပ်တာ ကြာလို့လား”
“မဟုတ်ပါဘူး မလုပ်တာ ၂ ရက်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်၊ စိုးကို လိုးနေရင်း ပြောရတာတွေ အရသာပိုရှိတယ်၊ မျက်လုံးထဲမှာလည်း စိုးကို သူများတွေ လိုးတာတွေ မြင်ယောင်နေတယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်”
“စိုးလည်း အရမ်းကောင်းတယ်၊ ကိုမောင်က သိသိကြီးနဲ့ စိုးကို လိုးနေတော့ စိုးနှစ်ခေါက်တောင် ပြီးသွားတယ်”
“အချိန်မရတော့ဘူး ကိုမောင် အိမ်ပြန်တော့မယ်”
“မပြန်နဲ့တောလေ ကိုဝယ်ထားတဲ့ တိုက်မှာပဲ အတူတူနေကြတာပေါ့”
“ဘယ်သူက အတူတူနေမယ် ပြောသေးလို့လဲ”
“စိုးက တူတူ မနေချင်သေးဘူးလား”
“နောက်တစ်ပါတ်လောက်မှပေါ့၊ လူကြီးတွေလည်း အမြင်ကောင်းအောင်လို့ပေါ့၊ တော်ကြာ ဒီနေ့အိမ်မှာတွေ့တယ် နောက်ပြီး တူတူပြန်နေတယ်ဆိုတော့ မကောင်းသေးဘူးပေါ့”
“အင်း ဒါဆို ကို နေပြည်တော် တက်ရဦးမယ် ၂ ရက်လောက် ကြာမယ်”
“အင်း ပြန်လာမှပေါ့၊ ပြန်လာရင် မိုက်ကယ် နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်၊ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း အလုပ်ကပဲလေ”
“စိုးက မျက်နှာမပူပေမယ့် ကို ကတော့ မျက်နှာပူတယ်”
“စိုး ဆိပ်ကမ်းက ကိစ္စတွေ ပြီးပြီလား”
“အင်း နောက် နှစ်ရက်ဆို ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လို့ရပြီ”
“အိုကေလေ နောက်အပတ်ထဲတော့ ငါတို့ပစ္စည်း ပို့ပေးနိုင်တာပေါ့”
“ဘာက အဆင်မပြေတာမျိုး ရှိမလဲ”
“ငါ့ယောက်ျား ငါနဲ့ ပြန်ပေါင်းတော့မယ်”
“သူက မင်းရဲ့အကြောင်းတွေကို၊ ငါပြောတာက မင်းနဲ့ မတွေ့တဲ့ အချိန်က ကိစ္စတွေကို သိလား”
“သူက အိုကေတယ် တဲ့လား”
“ဒါဆိုလဲ ပြန်ပေါင်းလိုက်ပေါ့၊ ငါတို့ ဒီအတိုင်းလေးပဲ ပြန်နေကြတာပေါ့ ငါတို့က တစ်ယောက် လိုအင်တွေ အတွက် တစ်ယောက်က ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ ပါတနာတွေပဲလေ”
“No strings attached ပေါ့၊ စိုး ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်တဲ့ အကူအညီတွေ တောင်းလို့ရတယ်နော်”
“ကျေနပ်ရဲ့လား ကို လုပ်ပေးတာ”
“ကို နှင်းကို မိုက်ကယ်လိုးသလို လိုးပေးကွာ”
“ကုတင်စောင်းမှာ အားရပါးရ ဆောင့်လိုးပေးကွာ”
“ကို့လီးကို စုပ်ပေးရတာ အဆုံးထိ စုပ်ပေးလို့ရပေမယ့် မိုက်ကယ့်လီးတော့ အကုန်မရလောက်ဘူး”
“ဘယ်ရမလဲ နှင်းရဲ့လီးက ရှည်လဲရှည်တယ် ကြီးလဲ ကြီးတယ် အကုန်ထည့်ရင် နှင်း ဘယ်စုပ်ပေးနိုင်ပါ့မလဲ”
“အင်း နောက်တစ်ခါကျရင် စုပ်ကြည့်ဦးမယ်”
“အောင်မာ ဘယ်က နောက်တစ်ခါလဲ ….”
“ကိုကလည်း တစ်ခါတစ်လေ သွားလိုးတာပေါ့ အမြဲတမ်းမှ မဟုတ်တာ”
“တော်ကြာ ကို့မိန်းမလေး စောက်ပတ် ချောင်သွားမှာပေါ့”
“အင်းလေ ကိုရဲ့ တစ်လမှ တစ်ခေါက်ပေါ့”
“အေးသွား….. နောက်တစ်ခေါက် မိုက်ကယ်ပေါ်တက်ခွရင် ဖင်တက်လိုးပစ်မယ်”
“တကယ်ပြောတာလား… ဖင်ကွဲအောင် လုပ်မှာနော်၊ ပြီးမှ ကြောက်ပါပြီ မလုပ်နဲ့”
“လုပ် .. လုပ် … တကယ်ပြောတာ အခုလဲ ဆောင့်ပေးလေကွာ .. ဘာလဲ နှင်း တက်ဆောင့်ရမလား”
“အောက်မှာနေရင် ငြိမ်ငြိမ်မနေနဲ့ နို့တွေလည်း စို့ပေး”
မိန်းမရဲ့ နို့လေးတွေကို မမှီမကမ်းလေး စို့ပေးလိုက် ဆွဲပေးလိုက်နဲ့
“ကို ပြီးတော့မယ် … အင့်ဟာ. … အင့်ဟာ”
“အားးးးး နှင်း ကောင်းတယ်”
“အဲလိုလေး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ဆောင့်ပေး အားရတယ်”
“ကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ ပြီးသွားပြီ … ဒီပုံစံလေးက ထိတယ် …အတော်ပဲ နောက်ဆို ဒီလိုပဲ ကို့ကို ဆောင့်ပေးတော့မယ်”
“နေဦး ကို မပြီးသေးဘူး….”
“ကိုလေ ဒီပုံစံလေးကို အခုမှ ကြိုက်တာ”
“ဘယ်လို ဖြစ်လို့လဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်….. နှင်းနောက်တစ်ချီတက်မလို့”
“အင်း နှင်းဖင်လုံးလေးတွေက ဒီလို မှောက်ခုံနေပေးတော့ အရင် ဖင် နည်းနည်းကောက်သေးတော့ လိုးလို့ အရမ်း ကောင်းတယ်”
“ကောင်းရင် ဘာလို့အစောကြီးထဲက ဒီလို လုပ်ပေါ့ ခုမှ”
“အင်း ခြေထောက်ကို အရမ်းကြီးမစိနဲ့ မိုက်ကယ်နဲ့တုန်းကလို နည်းနည်းဟပေးး”
“ဟင်းးးးးးး လူဆိုးကြီး.. ကိုယ့် မိန်းမကို သူများလိုတာကြည့်ပြီး အတုယူ လိုးနေတယ်”
“သူက ပိုသိတာကိုးးးးးးးး ဟားဟား”
“လုပ်ကွာ သွက်သွက်လုပ် ပြင်းပြင်းလေးထည့် ဒီမှာကောင်းလာပြီ….”
“နှင်းကို မိုက်ကယ် လိုးတုန်းက နာလား”
“ကောင်းတယ် ….အခုလဲ ကောင်းတယ်”
“လီးကြီးတော့ ပိုမကောင်းဘူးလားး နှင်းကလဲ…. ဟာ ကောင်းတာကွာ အဲလို တစ်ချက်ချက်ကော့ကော့ပေးတာ”
“မိုက်ကယ်တုန်းက ကော့ချိန်တောင် မရှိဘူး….. မွေ့ယာအောက်မှာ မြုပ်နေတာပဲ”
“နှင်းက ပို ချစ်တာပေါ့…”
“စိမ်ထားပေးကွာ…… အဲလိုလေး မှောက်ပြီးနေ ….”
မုန်တိုင်းတွေ ပြီးရင် လေပြေတွေ လာတတ်လားတော့ မသေချာဘူး။ မုန်တိုင်းတွေ ကြီးရင်တော့ ထမင်းထုပ်တွေ ဝေပေးတတ်တယ်။
“အေးကွယ်…. အခုလို မိစုံဖစုံဖြစ်သွားတော့လဲ မြေးလေးဖို့ ပိုကောင်းတာပေါ့ သားတို့ သမီးတို့လဲ နောက်ဆို သူ့အခက်အခဲ ကိုယ့်အခက်အခဲ တွေကို နှစ်ယောက်အတူတွဲ ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေ…. ပြီးခဲ့တာတွေလဲ ပြီးခဲ့ပါပြီ… ပိုကောင်းတဲ့ အနာဂါတ်ပဲ ဖြစ်ပါစေ……”
“မြေးလေးကိုတော့ စိတ်ချ… အခုလဲ အိပ်နေရှာတယ်၊ ကဲ ဟန်းနီးမွန်ကိုလဲ စိတ်ချလက်ချသွား သားကိုမောင်.. ဧည့်ခံဖို့ ကိစ္စတွေကကော…”
“အင်း လူရင် ၁၀ ယောက်လောက် ဖိတ်ပြီးပဲ ဒင်နာလောက်ပဲ လုပ်မယ်လေ”
“အေးအေး အမေတို့နဲ့ နေတယ်ဆိုတော့ လင်မယားနှစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာသာနေ ဟုတ်ပြီလား”
စိုးတို့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း ပွဲလေးကို လူအနည်းငယ်နဲ့ပဲ လုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးရင်တော့ ငွေဆောင် ချောင်းသာဘက် တစ်ပါတ်လောက် နေဖို့တော့ စီစဉ်ထားတယ်။ လိုက်မဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ကိုမျိုးတို့ လင်မယား နှစ်ယောက်လဲ ပါမယ်။ ကိုမျိုးကတော့ မျက်နှာပူလို့ မလိုက်ချင်ဘူး ပြောပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုမောင်ကလည်း လိုက်ခဲ့ဖို့ ဖုန်းဆက်ပြောတာနဲ့ပဲ သူလဲ ငြင်းလို့မကောင်းတာနဲ့ပဲ နှင်းကို မေးကြည့်တော့ “သွားတာပေါ့ သွားတာပေါ့” ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခရီးဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါ‌တယ်။
မီးမီးနှင့် ကျွန်တော် →